MERO PUNARVASH by tnbhandari62 - Issuu
bvnghghjghvbvcbcvbह्ग्घ्घ MY REHABILITATION
मेरो पुनर्वास MY REHABILITATION
मेरो पु नर्वास
TEK BHANDARI MY REHABILITATION
गजल महालक्ष्मी सरस्वती मम्तामयी ज्ञानी ततमी हसं माति सतजएकी ब्रह्माण्डकी रानी ततमी। मनको मैलो पखालेर ज्ञानको ज्योतत जलाउँने ततमी माता ततमी जननी तिक्षाकी खानी ततमी। अज्ञान्तालाई हटाएर वद्धृ बालक सबको मनमा नतबझाई बास गने आँखाकी नानी ततमी। तबँडा पस्ु तक धारण गरी पतवत्र पाठ पढाउँने ततमी महान तवद्या देवी सववश्रेष्ठ दानी ततमी।
गजल सनु सान एक्लो रातमा जनु बनेर खल्ु ने ततमी पहाड तराईका फाँटमा धनु बनेर डुल्ने ततमी। पणू क व ो चन्रमा झै ँ सन्ु दर िान्त तविाल बनेर बस्तीका झप्रु ा झप्रु ामा सनु बनेर झल्ु ने ततमी। प्राणको बाजी लगाई तनमवल कन्चन जल बनेर चराइरहेका चोटहरूमा खनु बनेर घल्ु ने ततमी। आँफु दख ु ेर अरूलाई सधै ँ करुणाको पात्र बनेर हृदयको पतवत्र मतन्दरमा गणु बनेर फुल्ने ततमी। ततमी नै त हौ जन्म जननी स्वगवदपी गररयसी हर्व उमगं सम्ु पेर अरूलाई तपडामा भल्ु ने ततमी।
गजल अतन्तम लडाई हो यो तजततन्छ या हाररन्छ यद्ध ु मैदानको प्रांगणमा मररन्छ या माररन्छ। घर ढल्यो िहर जल्यो मरे बाँच्ने आधारहरू अब प्रेम तबतहन ज्वालातभत्र पररन्छ या पाररन्छ। गररए धेरै सम्झौताहरू तर भए सबै खरानी लाघछ अब महासागर तररन्छ या ताररन्छ। सँगसँगै पाईला सादाव फुलको धारले घोचेपतछ साँच्चै आयव घाटमा बसाई सररन्छ या साररन्छ।
गजल(आमा) मलाई प्यारो लाघछ सधै ँ आफै ले टेकेको माटो अतन उतन मस्ु कु'राउँदै आएर छे केको बाटो। तपडाले छाती पोल्दा माँझपख मलम लगाई कसरी सकँु ला र भल्ु न उनीले मेटेको खाटो। उनी हुन महान आमा काँडामाँझ पाईला साने आँफु हाँसेर अरूलाई पलपल रुवाउँनक ु ो साटो। माटो र आमा भन्नु एउटै तसक्काका दईु पाटा उसको र मेरो भनेर कतहलै नल्याउने फाटो। उतन नै जन्म जननी सववश्रेष्ठ ममताकी खानी प्रेम र सद्भाव जगाउने कतै नराखी राँटो। गजल
रहेनन् ती फाली कोदाला हलो अतन जवु ाहरू रहेनन् अब अघला आली अतन खेतका गराहरु। भत्के होलान् बारी बीचका धान रुँघने टहरा ती रहेनन् अब हररया तबयाडे पानी झने समाहरु। छै नन् कतै अघला कुतनउँ धानका तबट्टा नभएर रहेनन् अब माना पािी गोरु घम्ु ने तमयाहरू। मौलायो होला मोिे झार जता ततै हौतसएर रहेनन् अब पराल सल ु ी कोदो झल्ु ने कान्लाहरु। आज सबै एकादेिको किा भयो जन्मभतू म अब मात्रै रहे इततहासमा जली जाने पानाहरू।
डुब्दैछ (ढलपल)२ अनौठो िहरतभत्र मेरो पनु वावस सरु ताल तबतहन लाघने यो मधरु ो प्रहरतभत्र मेरो पनु वावस। खै ततमी कसरी बाँच्दैछौ तेता नयाँ तजवनिैली अँगाल्दै एता त तववि भएर सतडरहेछ जहरतभत्र मेरो पनु वावस। आज त जसो तसो रमाउँदै छु इततहासलाई तबतसवएर भोतल लँगडो भएर फँ स्न सक्छ नहरतभत्र मेरो पनु वावस। लाघछ मलामीले सख ं तबनै अतस्तत्वको तललामी भाउमा अपहरण गनेछन् औसरवादको लहरतभत्र मेरो पनु वावस। सक ं ाका तरंगहरु छतल्कन्छन् भोतलको भतवष्य सझं रे साँच्चै अन्त्य हुनसक्छ कुतण्ठत ठहरतभत्र मेरो पनु वावस।
गजल मान्छे ले तसफव हेदछव अधरलाई अतन बतहष्कार गछव कदरलाई। अमतृ भनौं त नामै काफी छ तर प्यालामा भछव जहरलाई। तवश्वासको त कुरै नगरौं हदुँ नै तस्वकानवु पछव झटू ा खबरलाई। फरक फरक सोच भएर होला सम्हाल्नै पयो मनको नगरलाई।
गजल नौ मतहना कोखको तपडा जोखेर आएका हामी बाध्यतामा जन्म भतू मलाई छोडेर आएका हामी। गभवको ढोका खोलेर वस्त्र तबनै हररयाली धतीमा नयनमा स्वतप्नल रँ गहरू घोलेर आएका हामी। आमाको काखमा पतल्टएर खेल्दै स्तन चस्ु दै दस धारा दधू को ऋण बोके र आएका हामी। सन्ु दर यो धतीमा िष्टृ ीको नौलो रोिनी तलएर माया ममताको इततहास कोरे र आएका हामी। आमाले ती तपडाहरू सन्तानका लागी रोजेका तपठ्यँमू ा सतु ी सतु ी भोगेर आएका हामी।
गजल तक्षततज पारी एक्लै मस्ु कुराउँदै नतजकको पतवत्र माया सक ु ाउँद।ै गयो धड्कन जहाज चढेर अन्तररक्षमा ती तारा देखाउँद।ै सन्ु दर मनमा आगो लगाएर बाटो छे क्यो काँडा तेस्यावउँद।ै सनु सान सडक पतन ब्यँतू झयो डरले चौतारीमा तपडा तबसाउँद।ै
गजल ततमी रम्छौ अँधेरीमा तिक्षाको तदप जलाएर स्वेत वस्त्र धारण गरी माधयु व धनु बजाएर। सन्ु दर िान्त पवन सरी मन मतन्दरमा सतज रहन्छौ अतिक्षालाई हटाउन ज्ञानको मलम लगाएर। बालक बद्ध नछुट्याई रतसलो पाठ पढाउँछौ चारै लोक धती धम्ु दै तवद्याको मागव खनाएर। मन मतन्दरमा ज्ञान'नको झन्डा फरफराई सधै ँभरर हे माता सरस्वती बस्छौ धतीमा रमाएर।
गजल आउँछु तिव म ततम्रो अवस्य पछुव चरणमा आज सतकन त के भो एतक्दन पछुव सरणमा। महा तिवरात्री यो पवव मैले सतकन मनाउन माफी चाहन्छु बम भोले छु म अतहले मरणमा। गाँजा भाँग धतरु ो चढाउन सतकन ततमीलाई लाचारी भै पयावछु म बेइमानीकै हरणमा। यस पाली यस्तै भयो भोले नाि नररसाउनू है मतु झवएको आँफनै िरीर लाँदै छु म भरणमा।
गजल फुल तटप्छौं फाल्छौं सडकमा तर महत्व बझ्ु दैनौ काँडा हुन्छन् हाँगामा यो कुरा कतहलै सोच्दैनौ ँ। घोचेपतछ तधकाछौ अरे यार ब्यिै तटपेछु भनेर सत्य यतहँछ अरूको तपडामा कतहलै दख्ु दैनौ। उपहार तदन्छौं खसु ी बाँड्छौं कोतपलामै तनमोठे र कतत दख्ु छ फुलको छाती त्यहाँ कतहलै पघु दैनौं। घमन्डको झोला तभरे र हाँस्छौं अड्डा अदालतमा कतत क्रूर छौं हामी तछमेकीको व्यिा सन्ु दै सन्ु दैनौं।
गजल जलाउनु तदयो साँझमा हृदयको मीठो सोचले बन्दैन जान लौ काम कतहलै ररस राग क्रोधले। सहनिीलता कमाउ अतन उच्च मान मयावदा जसरी हरबखत तपडा सहेर फल तदन्छ बोटले। बत्ती बाल मनको उठाउ पाखरु ा बढाउ जाँगर जसरी कतमलाहरु कसरी भारी बोक्छन् जोसले। झटू को सहारामा बाँच्ने हरू तड्पी रहन्छन् सधै ँ त्यसैले कतहलै नछल्नू कुराहरू लाली ओठले।
गजल गररब छु मसँग कुनै दाम नखोज अरे यार बेरोजगार छु काम नखोज। हातमा घातक प्याला बोक्दै तवश्वास घातको सटु ु क्क मेरो गाउँ पसेर धाम नखोज। हनमु ानको अगाडी मलाई रावण बनायौ अब फे री म तभत्र ततम्रो राम नखोज। जाने रै आगो लगायौ जलायौ सबै िोक त्यसैले ध्वस्त यो छातीतभत्र नाम नखोज।
गजल यद्ध ु हो उसको चपु चाप रहु अतग सनव देउ सक्छौ साि देउ नसके गनेलाई गनव देउ। तछमेकीमा फुल फुल्दा राम्रो पक्कै भन्छौ होला त्यसैले त फुल्ने फुललाई सवु ास छनव देउ। उसको आँगन तसँगाररँ दा ततमी पतन पक्कै हाँस्छौ याद गर उताको तसँगार पटार यता तनव देउ। के को लातग तेरो मेरो आतखर मान्छे एउटै पतहचान बँच्छ भने ित्रमु ाति जाई पनव देउ।
गजल झपु डी प्यारो बगरको बनेथ्यो तपडा सजाउँदै बाँसका भाटाहरू बीच सनु ौलो भतवष्य बनाउँद।ै कतहले झदवथ्यो (तप्त)२ तसतका िोपा तसरमा रातभरर तारा'हरू गनेर सत्ु दथ्यौ छानो समाउँद।ै तचमका खाट तबस्तारा बच्चालाई कम्बल ओढाई स्वगवको कहानी सनु ाई सतु ाउनु पथ्यो फकाउँद।ै तबहानी सयू वले तगज्याउथ्यो पारदिी छानो तोडेर साँच्चै मीठो क्षण तबतेथ्यो मधरु ो टुकी जलाउँद।ै
गजल अनपढ तियो भजन'हरू गायो पररवतवन ल्यायो अँध्यारो तियो उजेलीमा आयो पररवतवन ल्यायो। सरु ताल तबतहन गीतका लयमा नाच्दै सडकमा आहा! यगु को परु स्कार पायो पररवतवन ल्यायो। दख ु कष्ट अतन दरररता सधै ँ पेवा बनाएर सबैको मन मतन्दरमा छायो पररवतवन ल्यायो। अन्नका नाममा एक एक चामलका तसता बटुतल पखाल्दै मीठो जाउलो खायो पररवतवन ल्यायो।
गजल मीठो बोल्दै स्वािवको बचन छोडेर जान्छ मान्छे अतन रतसला बातहरूमा जहर घोलेर जान्छ मान्छे । क्षतणक साईनो जोतडन्छ यहाँ अतन तोडमोड गदै घातको मसीले डायरीमा पत्र कोरे र जान्छ मान्छे । अनहु ार बदल्दै छे पारो झै ँ दतु नयाँको आँखा छल्दै इच्छाहरू परु ा गरी छुरी रोपेर जान्छ मान्छे । तहजोका ती आफन्तहरू पराईको घम्ु टो ओढेर मध्य रातमा मटु ु तनचोरी आयु तोके र जान्छ मान्छे ।
गजल मान्छे को मन पत्िर बनेर एकोहोरो हाँसेपतछ अतन पत्िर सँगै यौवन उपहार'हरू बाँडेपतछ। महोदय अब खै कहाँ बाँच्छ र प्रेमील कहानी हरे क मनका ज्वारभाटा'हरू जहरले झानेपतछ। फुल रहँदनै न् हेर काँडाहरू तबरतिएर तहँड्छन् सन्ु दर हररयाली वसन्त यहाँ त्रासले कामेपतछ। अरे यार अब त मतू तव पतन उठ्नेछन् होतसयार जब तक मान्छे ले मान्छे लाई नै मानव िालेपतछ।
गजल आिल ु े तभजेका नयन पानी पदाव पतन डराउँछन् बादल गतजव'एको बेला डरले नसाहरू कराउँछन।् जब रातमा चाँदले तचहो गदाव आँखी झ्यालबाट तनन्राको हत्या गरे र परे लीहरू एक्लै बर'बराउँछन।् कतत अचम्म तपडाका मलामीहरू नौमती बाजामा उत्सव मनाउँदै छातीको प्रांगणमा सर'सराउँछन।् लछादै तससाका नेलहरूमा एकोहोरो सख ं फुके र आडम्बरी काल जीवनलाई मतृ घोतर्त गराउँछन।्
गजल छाती अँठ्याई धड्कन रोके र तहतं डरहन्छ जीवन फुटेको मटु ु बाट रगत खोके र तहतं डरहन्छ जीवन। कतहले तभज्छ तनथ्रक्ु क भई घातको पतसना छुटेर यसरी उजाड मन बोके र तहतं डरहन्छ जीवन। हुरी बतासको के कुरा काँडाहरू'लाई परास्त गदै तबना डर आफ्नै आयु तोके र तहतं डरहन्छ जीवन। अतन च्याततएका ती प्रेम पत्रहरू सडकमा जलाउँदै जीवन तवनािको मतदरा धोके र तहतं डरहन्छ जीवन।
गजल तकस्ता तकस्ता गरे र जोडेको कस्ती डुबेपतछ काँडाहरू फुलको तवरुद्ध एक भएर जटु ेपतछ। यहाँ घती डराउँछ वसन्त बलात्कृत हन्ु छ जब मत्ृ यक ु ा धनु हरु पात पातमा फुलेपतछ। नदीका तकनारहरू छाल तबना मौन रहे झै ँ हरे क जीव बेरोजगार बन्छन् सबं न्ध गमु पे तछ। मानौं जनु धाम तारा तबना अन्धकार भए झै ँ यहाँ हरे क मन अँध्यारो हुन्छ घातले पजु ेपतछ।
गजल आँसक ु ो मोल चातहए आउ सोध मेरा अधरलाई कसले देख्यो र आँसु सरी हाँसेको मेरो नजरलाई। बादलले गगनलाई धरुु धरुु रुवाए झै ँ कतत रोए िे ँ रुवाई मै तबते पलहरू तवश्वास गदाव बगरलाई। मान्छे को कमव नजाती धमव अतन ममव नजाती घातले तवस्फोट गररयो मनको िन्ु दर िहरलाई। ईमान बेचरे मान तकन्नेहरू हो प्रेमको रोष्टम घेरेर कतत गछौ छुरा प्रहार आत्मासाि गदै झटू ा खबरलाई।
गजल बादल बनी आकाि माति डुल्न पतन सतक्दन म मन बझु ाउँन प्याला बोकी झल्ु न पतन सतक्दन म। सनु का बाला हातमा तदँदै ततमी मेरी तप्रये भन्दै खि ु ी पानव सनु गाभा झै ँ फुल्न पतन सतक्दन म। तवश्वास घातको ततर लाघदा जब बेहोस बनेपतछ रातको जनु झै ँ खसु ी छदै खल्ु न पतन सतक्दन म। फुल तदँदा काँडा सतु म्प यो छातीको चौराहामा हाँस्दै गाड्या तनदवयी नेल भल्ु न पतन सतक्दन म।
गजल तजन्दगी बेरंग बनेर पतन रँ गहरू खोजी रहन्छ चपु चाप हाँसी खि ु ी ददवका गरुंगा भारी बोकी रहन्छ चपु चाप। यहाँ काँडाहरू डराउँछन् खाली पाउका रे खाहरू देखेर मसु क्ु क हाँस्दै सत्रसु ंग पतन नाता जोतड रहन्छ चपु चाप। ठोतक्कँ दै हुरी,बतास,भेल,बाडी अतन ढुंगाहरुमा बाँच्ने झीनो आि बोके र मत्ृ यल ु ाई रोतक रहन्छ चपु चाप। हर पल संघर्वका नारा लगाउँदै मौनताको छाता ओढेर पटुकी कस्दै खाली पेटमा इततहास कोरी रहन्छ चपु चाप।
गजल धततव एकै हो जनु घामको तर प्रहर फरक पयो मान्छे सबै एउटै भएनी हेररने नजर फरक पयो। रातै छ रगत सबैको चाहे कालो होस या गोरो बोलीले मख्ख पारे तन देतखने अधर फरक पयो। फूलपाती भेतट भन्दै िालीमा जहर छोप्नाले घणृ ा बडेर मतन्दरमा ईश्वरको सफर फरक पयो। प्रेमको ढोका बन्द गरे र घतृ णत ढोका खोल्नाले रीतततितत र सबं न्धमा गररने कदर फरक पयो।
गजल हानेहरु सधै ँ हारररहे तजत्नेले पो खै के पायो भजन गाउँदै झ्याम्टा झ्याली तपट्नेले पो खै के पायो। तजत्ने पतन उही मान्छे हाने पतन त उही न हो उनको मेरो प्रेमको तसमाना तमच्नेले पो खै के पायो। अलग तिए गभवधारण तर जन्मेपतछ एउटै माटो फे रर नातावादका पत्ती'हरू तफस्नेले पो खै के पायो। आतखर मानव सबै एउटै मदाव जाने एउटै घाट मदु ावको पतन स्वाट्ट मटु ु तझक्नेले पो खै के पायो।
गजल माति'बाट छहराले छयाव पानी छुँदा'खेरी तल ढुंगा तपडा बाँड्दै रोए'सरी रुँदा'खेरी। िाहा हन्ु छ जीवन के हो ठोतक्क'एर ढल्दा आँफनै आँिु पोतखएर मन मटु ु धँदु ा'खेरी। आफन्तलाई परै छोडी तहँड्दै जाँदा ठे स लाघछ रीतत'तितत परम्परा छाती फुटी चदँु ा'खेरी। जन्म कमव जता जहाँ भए पतन मान्छे एकै श्राप लाघछ कुनै तदन अहक ं ारी हदुँ ा'खेरी।
गजल सँगै तहँड्दा काँडा'हरू पाउ'भरी बीजे'पतछ धततवनै उजाड हुदँ ो'रै छ बेईमा'तनले तजते'पतछ। भन्नु के नै रयो यहाँ फुलले पतन घोच्दो रै छ तससा सरी नाता टुटाई बसाई सदै तहँडे'पतछ। घर फुट्छ िर छुट्छ मटु ु हुन्छ तछया'तछया यता माया देखाएर आत्मा अन्तै तमले'पतछ। छाती दख ु ाई खोटी माया नगनवू नै जातत'रै छ जब फूल तदँदा'खेरी काँडाले पै ँचो ततरे 'पतछ।
गजल कोमल ह्रदयमा काँडा तबझ्छ अतन घात हुन्छ यताको माया उता तमल्छ अतन घात हुन्छ। मन्द मस्ु कान छरे र बेइमानी औँला चलाउँदै सववस्व सारा अकै लाई तदन्छ अतन घात हुन्छ। मीठो बोली बचन यहाँ गनै हुन्न आँखा तदै क्रोधीत बनेर आफै ले तजत्छ अतन घात हुन्छ। बाटोभरर काँडा छदै तपडा तदन्छन् अरूलाई आँफु फूलै फूलमा तहँड्छन् अतन घात हन्ु छ।
गजल तहँड्दै जाँदा दोबाटोमै म सँगको साईनो तोडेउ साँचो माया पाउले कुतल्च अकै संग साईनो जोडेउ। लाघथ्यो ततम्रो मेरो साि सनु गाभा झै ँ फुतलरोस तर आज फुल्नै नपाई कोतपलामै साईनो गोडेउ। हातेमालो गरी तहँड्दै अगं चम्ु या भल ु ेउ क्यार भमराझै ँ छानी छानी रस चस्ु दै साईनो फोडेउ। दतु नयाँको प्यास मेट्ने आतखर ततमी पानी रै छौ लटु ाएर आफ्नै अगं आतखर अन्तै साईनो मोडेउ।
गजल सझं ौता गरे र जीवनमा कयौंचोतट हारे र बाँच्नपु छव नचाहँदा नचाहँदै नयनबाट आँिु झारे र हाँस्नपु छव । (तड्प)२ तड्पँदै तचसो कोठालाई अँगालो हालेर रातमा तेल तबनै तदयोको सलेदो सारे र जाघनपु छव । प्रेमको नाममा घातक आँकुरा पलाउन िालेपतछ जीवनका ती तसमानाहरू माया मारे र काट्नपु छव । मस्ु कान छरे र यौवनको खोट बोक्नेको भीडमा पछातड को आउँदछै होतसयारले कदम चाल्नपु छव ।
गजल घात अतन प्रततघात सहेर बाँच्नेहरुको यगु हो यो छाती कुल्चेर पाइला'ती चाल्नेहरूको यगु हो यो। मलम परट्टको के कुरा,आलो घाउमा चक ु छरे र मदु ाव र मलामी बीच नाच्दै हाँस्नेहरूको यगु हो यो। प्रेम सद्भाव छै न यहाँ मरुभतू म झै ँ लाघछ हर पल ईष्यावलु भावनाले आगो ताप्नेहरुको यगु हो यो। कुल्चँदै फाँतडन्छन् संबन्ध यहाँ भस्मे फाँडे'सरी रोप्नक ु ो सट्टा हररया रुख काट्नेहरूको यगु हो यो।
गजल तहँडेर कतहलै निाक्ने खट्टु ाहरू नेल भन्दैनन् तहतडरहन्छन् हुरी बतास अतन भेल भन्दैनन।् चाहे क्याक्टसको ियन लगाईयोस तचन्ता छै न आईया भन्दै झक ु े र मलमका लातग तेल भन्दैनन।् बाटोभरर भेतटन्छन् काँचका गल ु ाब तदनेहरू चपु चाप तस्वकार गछव न् कसैको खेल भन्दैनन।् तपडा माति तपडा बोके र तहँड्नु नै उसको पतहचान हो रातमा ततरस्कृत पररकार पाक्ने जेल भन्दैनन।्
गजल पत्िर सतम्झएर फाल्यो अतन साँच्चै डराई तदएँ। फाली झै ँ आरनमा झान्यो अतन फे री कराई तदएँ। कतहले रे ट्यो खपु ेटोको रे तीले धार रे टे सरी छातीमा करुवा गाड्यो अतन एक्लै बर'बराई तदएँ। नाना'िरी गाली गदै आँगन बीचमा पल्टाएर बन्चरोले छाम्दै काट्यो अतन तपडामै हराई तदएँ। सालको मग्रंु ो हातले समाई ड्याम्म ड्याम्म पादै पतछबाट ठे डी खाँद्यो अतन आँखा तराई तदएँ।
गजल घातले फाटेको छाती टाल्दै छु जोड्न नआउ फे री टुटेको मन सम्हाल्दै बाँच्दै छु सोध्न नआउ फे री। आँसक ु ा िोपाहरु पछु ी आँफनै दतु नयाँमा रमाउँदै खि ु ी सापट तलएर हाँस्दै छु खोस्न नआउ फे री। ततम्रो हात समाई तहँड्न खोज्दा जब लत्यायौतन एक्लै बाटोमा पाउ राख्दै छु रोक्न नआउ फे री। अब तकनारा झै ँ वाररपारर भएर तहँड्नु छ सधै ँभरर त्यसैले लक्ष्मण रे खा तान्दै छु तब'िोल्न नआउ फे री।
गजल अलपत्र भएको कहानी सधै ँ लक ु ाएर बसे ँ ब्यिै व्यिाका नतु नला आँिु छुटाएर बसे ँ। यस्तो लाघथ्यो ईन्रेणीझै ँ जीवन हन्ु छ भन्ने इन्धन तबनाको तदयो जस्तै ससु ाएर बसे ँ। यो छातीमा घातको छुरा प्रहार भए देतख तर हरे क तदन तपडाले मन दख ु ाएर बसे ँ। रोगी'एर जब ढले ँ अतस्त'पञ्जर गलेपतछ प्रेमको तनिानी पराई हातमा बझु ाएर बसे ँ।
गजल आफै ले आफै लाई बेच्नपु छव घातको बजारमा नचाहँदा नचाहँदै खेल्नपु छव घातको बजारमा। भेल बाडीको ढुगं ा रहेछ जीवन गन्तव्य हदुँ नै पलपल काँडाहरू टेक्नपु छव घातको बजारमा। िब्दहरू के रमेट गरे झै ँ संबन्ध के रमेट गररएपतछ तवयोगान्तको किा लेख्नपु छव घातको बजारमा। चोखो मायाको तसमाना भत्काएर तहँड्नेहरूकै तभन्न तभन्नै खेलहरू देख्नपु छव घातको बजारमा।
गजल चम्ु बन तबनाको जवानी/२ हदुँ नै ओठ रङ्गाएर आउनु कतठन होला यद्ध ु मैदानमा िोरै मतदरा लगाएर आउन।ु गोली बारुद पड्कनँ सक्छ प्यासको होडबाजीले रक्त्याम्म हुन सक्छ सररर सेफ्टीनेस अपनाएर आउन।ु सनु ौला पहाडहरू उक्लदा ततम्रो छाती चतकव एर दख्ु ला त्यसैले आउनु अगावै के ही प्यानाडोल चबाएर आउन।ु अघला भन्ज्याङ तरे र जब तलाउमा पौडँदै हुन्छु म त्यसै बेला अनौठो किा लेख्नु छ अगं सजाएर आउन।ु
गजल छनछनी चरु ा बजाउँदै बबाल गरे उ मध्यरातमा बै ँसको त्यो हुरी चलाउँदै बबाल गरे उ मध्यरातमा। सन्ु दर त्यो रूपै राम्रो अप्सरानै हार खाने त्यही रूपले आगो लगाउँदै बबाल गरे उ मध्यरातमा। प्रेमको निा तपएर धड्कन छाम्िेउ अतत प्यारले त्यही प्यारमा जहर तमसाउँदै बबाल गरे उ मध्यरातमा। चाँदनी झै ँ मसु क्ु क हाँस्दै औँला छोप्दै पछ्यौरीले कोमल हातले छुरी समाउँदै बबाल गरे उ मध्यरातमा ।
गजल जवानी लटु ाउनु पैसा जटु ाउनु उस्तै उस्तै हो सािी फुल फुलाउँनु मन भल ु ाउँनु उस्तै उस्तै हो सािी। पहाड तराई चढ्दै र झदै हैरान बन्छ मान्छे रातमा प्रेतमका रुझाउँनु तचत्त बझु ाउँनु उस्तै उस्तै हो सािी। तपडा माति तपडा बढ्छ जब होस गम्ु छ जवानीले तभत्र हुलाउँनु र बाटो खल ु ाउँनु उस्तै उस्तै हो सािी। नतदएर नहुने चीज माँग बढ्दा प्यासको बजारमा छुँदा दख ु ाउँनु छोड्दा रुवाउँनु उस्तै उस्तै हो सािी।
गजल मौन आँखाको भाकामा िीतको िोपा रूँदो रै छ काँडाले बाटो छे केपतछ तपडा पतन चदँु ो रै छ। तवश्वास घातले कुतटएपतछ तहँड्दै जाँदा बगरमा पाउले टेक्दा तगट्टी बालवु ा रोडा पतन कँु दो रै छ। जब प्रेमको बन्धन धागो जस्तै चतु टएपतछ औँलाले बल्दै गरे को आगो पतन छुँदो रै छ। यस्तो लाघछ यो धतीमा मानवता तबक्री भएपतछ आफ्नै बा लाई तचतन्दन भन्ने छोरा पतन हदुँ ो रै छ।
गजल तजउँदो छु भनेर प्रमातणत गनवु पयो रे सरकार भन्दै छ लाि पतन बौररएर फे रर मनवु पयो रे सरकार भन्दै छ। तजउँदो र मदु ाव नतचन्नेले देि कसरी तनमावण गछव यवु ाहरू खाडीमा बसाई सनवु पयो रे सरकार भन्दै छ। मेलम्चीले तदएको उपहार िाप्न खाली गाग्री डराउँछन् यार मल ू नफुटे पतन पानी झनवु पयो रे सरकार भन्दै छ। देिको झन्डा टेबल ु माति फरफराउँदै तसहं दरबार कराउँछ सभासदकै लातग खजाना भनवु पयो रे सरकार भन्दै छ।
गजल सोचे कोमल फुल तटपे काँडा रहेछ घोतच तदयो सोचे असल सािी भेटे खराब रहेछ छोडी तदयो। मौन रहे ँ एकै तछन फे रर अतग सरे ँ हात समाउँन हातहरू त साँच्चै ज्वालामख ु ी रहेछ पोतल तदयो। एकै तछनमा बेइमान आयो समायो श्रीमतीलाई उनीहरूकै पो सब िोक चल्दो रहेछ खोतस तदयो। यता तठक्क पारे र उता बीउ छदी रै छ नक्कली हेदाव हेदै मेरै सामन्ु ने उनको तसउँदो पोतत तदयो।
गजल ए मतू तवकारहरू हो भो अब नबनाउ ती मतू तवहरू अततवादको तवरुद्ध बोल्दैनन् भने नसजाउ ती मतू तवहरू। हो ततमी महान छौ ढुगं ा खोपेर मदु ाव पतन जगाउँछौ तर भ्रमको संख फुक्दै खनु ले नरँ गाउ ती मतू तवहरू। पजु े ँ तवश्वास गरे ँ तर त्यही तवश्वासतभत्र घात उतम्रन्छ भने घर घरमा सजाउ भन्दै मेरा हातमा निमाउ ती मतू तवहरू। कुनै तदन ततमी तवरुद्ध आवाज उठ्न सक्छ सडकमा तर पतन प्रततकारमा उठ्न नसक्दा नजलाउ ती मतू तवहरू।
गजल सन्ु दर िान्त तबहानीले पाईला अन्तै मोडे जस्तो बादलक ु ो गववतभत्र लाजको घम्ु टो ओडे जस्तो। आकाि धती डम्मै पारी कुतहरोको जमघटले लाघछ आज प्रकृततले साईनो िोरै तोडे जस्तो। सयु व पतन डर त्रासले खै कताततर अलप भए साँच्चै पथ्ृ वीलाई यहाँ माया गनव छोडे जस्तो। कतै झरी झम झम गछव ठन्डी ठन्डी पवनसँगै तकन भयो जता ततै सारा आकाि फोडे जस्तो।
गजल बसन्तले झै ँ सवु ास छरे र खसु ी हुन सतकएन ईन्रेणीझै ँ रंग भरे र खसु ी हनु सतकएन। कै तहलै भएन द्वन्द मन मटु ाब र बन्दहरू भन्दै उनको मन हरे र खसु ी हुन सतकएन। मैले चाहेको चोखो माया आज पाएँ छु भनेर उनको काखमा मख्ख परे र खसु ी हुन सतकएन। हरे क पल मनको मैलो पखाल्दै खल्ु ला आकाि झै ँ स्वगव सरी यो िहरमा झरे र खसु ी हुन सतकएन।
गजल तनष्ठुरीका यादहरू कतल्प कतल्प रोएँ रातमा कागजको पाना झै ँ सतल्क सतल्क रोएँ रातमा। सतम्झएर जनु ेलीमा तारा गन्दै टोलाउँदा झनाव जस्तै आँसहु रू छतल्क छतल्क रोएँ रातमा। सम्झनाका रे खाहरू खेलाई खेलाई परे लीमा आँफनै अनहु ार तससातभत्र टतल्क टतल्क रोएँ रातमा। छुट्दाखेरर मटु ु बाट उनको माया काँड सरी झ्यालबाट बातहर हेदै ढतल्क ढतल्क रोएँ रातमा।
गजल नतजक आउ तप्रये झर झर झनाव बीच खसौं यौवन क्रीडा गदै एउटै आिनमा बसौं। ततमी धती म आकाि भएर सगं सगं ै। जवानीको पोखरीमा प्यास मेट्न पसौं। तहमाल पहाड तराई झरौ ँ अगं मन्िन गदै धडक धडक गने बदन अँगालोमा कसौं। स्वगव सरी यो धतीमा मौसम हेर मनमोहक अमतृ तपउँदै नाँगले जस्तै एक आपसमा डसौं।
गजल औँसी नै प्यारो मलाई चाँतहदैन जनु को रात पत्िर नै काफी छ चाँतहदैन सनु को खात। चाँतहदैन झटू ो मतन्दर आत्मा तबक्री हन्ु छ भने मनको मतन्दर नै काफी छ चाँतहदैन खनु को जात। छातीभरर काँडा रोपी सारा खसु ी लटु ेपतछ तपडा नै काफी छ चाँतहदैन धनु को मात। घातको माला पैराएर दोबाटोमै छोडे देखी आफ्ना हात नै काफी छ चाँतहदैन ततम्रो हात।
गजल ततमीले तजतेउ मैले हारे ँ सनु को माला पायौकी त तवश्व प्रतसद्ध भएर कुनै संग्रहालयमा छायौकी त। मैले हादाव ततमीलाई खै के के कतत फाइदा भयो खसु ीयाली मनाउँदै रोदीमा गीत गायौकी त। ततमी महान ततमी तवद्वान् परु ै राष्र हाँक्ने ततमी आँधी जस्तै उतलवएर देिमा तवकाि ल्यायौकी त। सोच्दै छु म घमन्डले जल्छौ होला लाि जस्तै होस गर अमतृ सम्झी जहर त्यो तपयौकी त।
गजल यात्रा,भ्रमण,पररकल्पना सोच त एकै तछन तखएर रमझम अतन खसु ीयाली आडम्बरी प्याला तलएर। गछौ के जब आफ्नै औकातले सीमा रे खा तोडेपतछ म,उ र हामीलाई भल्ु दै मपाईत्वले छाती तसएर। नगर घमव सास्त्रका कुराहरू जब आँफै तगछौ भने मतन्दर र स्तपू ा,चचव र मतस्जद तभत्र नसा तपएर। कोट टाईमा तवद्वान्का तबल्ला तभरे र तहँड्नेहरु हो सोच त सडकमा मत्ु नेहरूले झै ँ एकै छीन तजएर।
गजल आफ्नो माटो उतै रयो वैरीका जठु ा हातमा झन्डा मतु न राष्रले नै भेद'भाव गदाव जातमा िोरै धमव,कमव बोकी हजरु आमालाई डोयावउँदै लातगरहे ठे सहरू बसाई सदाव मध्य रातमा। फतकव एर पतछ हेदाव खरको छानो रुँदै तियो डाँडा भाटा बतलरहँदा दनदनी आगोको खातमा। कतत फुटे चरु ाहरू पतु छएर अनमोल तसउँदो कयौ ँ मन उजातडए आँिु झदाव राष्र घातमा।
गजल देि खोज्दा भेर् गम्ु यो गम्ु यो आफ्नै जन्मभतू म के नै रयो आफ्नो भन्नु छुट्यो आफ्नै जन्मभतू म। जले पस्ु तक कलमहरू आवाज उठ्दा सडकमा वैरी सामु घडँु ा टेक्दा चक्ु यो आफ्नै जन्मभतू म। तप्प-तप्प आँिु झारी आकािलाई हेदै सत्ु दा सम्झनाले छाती माँझ दख्ु यो आफ्नै जन्मभतू म। बाध्य बनी पनु वावसलाई रोजेपतछ यो मनले साँच्चै अब छातीबाट पछ्ु यो आफ्नै जन्मभतू म।
गजल आजकल मेरो देि कुन भगू ोलसँग छ िाहा छै न खै टुइटर,यटु ु बमा छ तक गगु लसंग छ िाहा छै न। मैले देख्दा सस्ु तरी रुँदै तियो ढुगं ातबच चेतपएर आज धनीसँग छ तक कंगालसंग छ िाहा छै न। उतत बेला सानो छँ दा पढेको तिएँ भू उत्तम भनेर यतत बेला तनन्जामा छ तक दगं ालसगं छ िाहा छै न। सन्ु छु आजकल तिर पाउमै माउसल ु ी पस्या छन् रे साँच्चै बेईतजगं मा छ तक बगं ालसगं छ िाहा छै न।
गजल यहाँ मातत्रत्व माने मराउँनेको बजार लाघछ यहाँ भातत्रत्व मास्ने मसाउँनेको बजार लाघछ। आँफु मात्रै पतवत्र महान अरू जठु ो नचल्ने भन्दै यहाँ जाततत्व जाँच्ने जँचाउँनेको बजार लाघछ। सातहत्य र सजृ नामा अश्लील िब्द प्रयोग गरे र यहाँ अतस्तत्व ढाल्ने ढलाउँनेको बजार लाघछ। आँफु नाँच्न जान्नु छै न अरू नाचेको टेढो भन्दै यहाँ व्यतित्व चाट्ने चटाउँनेको बजार लाघछ।
गजल बेच्नेले खै के के बेचे मैले आफ्नै माटो बेचे ँ तहँड्दै जाँदा तभडन्तमा अगं कै एउटा पाटो बेचे ँ। अतघपतछ लामा लस्कर झोली बोकी तहँड्दै जाँदा वैरी सामु हेने आफ्नै आँखा'कै न्यानो टाटो बेचे ँ। चौतारीमा बेइमानीले चार पाउ बाँधी चटु ेपतछ तहँड्ने खट्टु ै टुतक्रएर गाउँ'घर पघु ने बाटो बेचे ँ। सन्तानमाति धावा बोली धरु ी तदउँसै जल्दा'खेरी सरण खोज्नु परे पतछ आफ्नै घरको भाटो बेचे ँ।
गजल नसके र दईु पाईला अँटाउन देितभत्र सतकएन पतहचान नै बचाँउन देितभत्र। रंग फे नव खोज्दा खेरी पस्ु तक जले वैरी सामु सतकएन भार्ा संस्कृतत सजाउँन देितभत्र। कतत खसु ी छाउथ्यो सोच कोठे बारी खेत जोत्दा सतकएन अन्न बाली कमाउँन देितभत्र। खसु ी लटु्ने वैरी सामु झक्ु नु पदाव घोतप्टएर सतकएन आँफनै आँिु खसाउँन देितभत्र।
गजल आधा रातमा बच्चा च्यापी पाइलाहरू मोड्नु पयो तेतसवएपतछ संतगन हातमा आफ्नै घर छोड्नु पयो। बँलेिीले साउती मादै भन्थ्यो नजाउ रुवाएर तर तवविताले घेरेपतछ माटोको नाता तोड्नु पयो। देि भेर् भार्ा गम्ु दा अन्यायको डढेलोले तितिल िरीर छोप्नाई तचसो बादल ओढ्नु पयो। यादका पोका सजाएर गाउँ घर भन्ज्याङ तबतसवएर अन्जान मल ु क ु तभत्र आज नौलो नाता जोड्नु पयो।
गजल भन्नहु ोस् लौ महािय देि तकन छाडी आयौ आफ्नै आँगनीमा बाउको लाि तकन गाडी आयौ। ततम्रै पतछ लाघदा यहाँ सारा घर बेघर भए हररयाली बस्ती सारा गोला बारुदले फाँडी आयौ। सोझा जनता अतग सारी तबहानीको प्रहरसँगै क्रातन्त के हो नबझु रे पाईला तकन माडी आयौ। आफ्नै तददी बैनी माति धावा बोल्यौ वैरी सरी खसु ीसँगै तसरको तसउँदो भन तकन उजातड आयौ।
गजल झरी जान्छु नभन है उठ्नलाई गारो होला मरी जान्छु नभन है टुट्नलाई गारो होला। आकािका तारा झाछुव भन्ने धेरै धेरै भेटे ँ उफ्री जान्छु नभन है झक्ु नलाई गारो होला। कताबाट आयौ ँ हामी समन्ु रलाई सोधी हेर बगी जान्छु नभन है पघु नलाई गारो होला। जन्मतदने जन्मभतू म रुन्छ होला सम्झी सम्झी भल ु ी जान्छु नभन है भल्ु नलाई गारो हो।
गजल सन्ु नेलाई सनु को माला नसन्ु नेलाई आँसक ु ो भेल उपहार बझ्ु नेलाई कोमल फुल नबझ्ु नेलाई काँडाको नेल उपहार। जान्नेहरू तहँड्छन् सँगसँगै नसके त कमण्डलु हातमा बझ्ु नेलाई मागव दिवन नबझ्ु नेलाई सैतानी खेल उपहार। नजान्नेलाई बगै ँचा बगर जान्नेलाई तहराकै आँगन बझ्ु नेलाई घर नै स्वगव नबझ्ु नेलाई नकव को जेल उपहार। मटु ु सधै ँ स्वच्छ पाछव ममताका मदृ ल ु मस्ु कानहरूले बझ्ु नेलाई मीठो प्रेम नबझ्ु नेलाई बेइमानी झेल उपहार।
गजल मेरो त हरे क पल पोखरीमै बास छ हजरु तदनरात और्तधकै भरमा सास छ हजरु । मतु झवएको फुल सरी पलपल ओइतल रहेछु कतहले पो मने हुँ मनतभत्र त्रास छ हजरु । एतडलेड यो नौलो िहरमा लािझै ँ भएर आतखर यो ज्यान डाक्टरकै पास छ हजरु । लतग रहन्छ मलाई गाडीले बोकी अस्पताल तपडाले िोरै मात्र बाँच्ने आि छ हजरु ।
गजल म ढल्दैछु तदन तदनै सारा माम्सपेसी गलेर म गल्दैछु तदन तदनै सरररमा भाइरस पसेर। मञ्चमा पदाव लागेझै ँ मधरु ीए सबै रोसनीहरू म छल्दैछु तदन तदनै धड्कनको गतत बडेर। कतहले सपवझै ँ तघस्रँदै गहु ार माँघदै मत्ृ यसु ँग म चल्दैछु तदन तदनै जन्तीका माँझ सजेर। कालको अदालतबाट मद्दु ा तफताव नहदुँ ा म जल्दैछु तदन तदनै तजउँदै तचतामा रमेर।
गजल म त मछुव तवर्ालु जहरसगं ै कमसेकम ततमी त बाँच मत मछुव अपरू ो रहरसँगै कमसेकम ततमी त बाँच। उज्यालो जनु को ज्योतत ततम्रै पेवासरी भो म त मछुव अँध्यारो प्रहरसँगै कमसेकम ततमी त बाँच। तवश्वास नै गरे नौ मेरो चोखो प्रेमको यद्ध ु मा म त मछुव अनौठो ठहरसँगै कमसेकम ततमी त बाँच। मत्ृ यक ु ो िैयामािी आतखर सतु ाएरै छाड्यौ म त मछुव घातको लहरसँगै कमसेकम ततमी त बाँच।
गजल ततमी बातहर तभत्र आत्मा छटपतटँदै होला पखावइमा ततम्रो त्यो आँिु लटपतटँदै होला। अबेर होला उनको आगमनमा धैयव गर आतरु ततम्रो मन भेट्नलाई खटपतटँदै होला। टुटाउँनु हुन्न बाँध हेर नडराउ कतत पतन अँगालोमा बेनव ती हातहरू झटपतटँदै होला। सख ु दख ु जेभएनी मौन रहेकै राम्रो हेर बह खोल्न ततम्रो ओठ फटफतटँदै होला।
गजल चड्नैपछव मेरो हरतदन मटु ु दख ु ाएर एक्लै लड्नैपछव डाक्टर माँझ तसर झक ु ाएर एक्लै। कै ले तबसन्चो त कै ले सन्चै हदुँ ा पतन सधै ँ बड्नैपछव अतघ यहाँ मनलाई रुझाएर एक्लै। जब धड्कन चल्न छाड्छ तेरो मेरो नभनेर सड्नैपछव अतन्तम पल्ट आफन्त गमु ाएर एक्लै। तबना और्तध हरे क अगं हरु चल्नै छाडेपतछ डड्नैपछव तचता माँझ घाटमा ससु ाएर एक्लै।
गजल तबयो'गान्तको रापमा जतलरहेछ जीवन तजउँदै जलेर पतन चतलरहेछ जीवन। यादै यादको बेमौसमी फुलहरू फुलाएर जतमनको पतझड जस्तै गतलरहेछ जीवन। अतस्तत्व लटु ेपतछ स्वािवका मलामीहरूले नांगो पक्की सडकमा ढतलरहेछ जीवन। छातीले तपडाहरू जब िाम्नै नसके पतछ घणृ ै घणृ ाको खातमा बतलरहेछ जीवन।
गजल कतत बचाउँछौ दैव अब त लगेनी हुन्थ्यो कतत जगाउँछौ दैव अब त लगेनी हुन्थ्यो। ओफ! जब बाँच्ने आधार टुटी सक्दा पतन कतत फसाउँछौ दैव अब त लगेनी हुन्थ्यो। ततम्रै पाउ परी आत्मा सम्मरपण गदाव पतन कतत फकाउँछौ दैव अब त लगेनी हुन्थ्यो। स्वगव हैन नकै तदए पतन त हुन्थ्यो मलाई कतत गलाउँछौ दैव अब त लगेनी हुन्थ्यो।
गजल जीवनको जीवन रहेन िहीद पतन बनेन मनव त मयो जीवन तर िरीर भने डडेन। सख ं फुतकयो साँझ कणावली तकनारमा अन्माई लतगयो घाट तर दाग बत्ती जलेन। तजउँदाका जन्ती मदावका मलामी उस्तै रहेछन् मलामी त हजार तिए कसैको आँिु झरे न। आँिपु ो झरोस् कसरी आमा न बाउ पटीका तर अतन्तम सस्ं कारमा म तबना तमट्टी चढेन।
गजल मरे र बाँच्ने मेरो चाहना त तिएन कतहलै यस्तै भो बेहोसीमा मरे र बाँचक े ो छु जतहलै। हरे क साँझ तबहान अतन रात सहेर रुन्छु चाहेर मनव पतन त सके को छुईन अतहलै। झीनो आि बोके र हरे क पल मटु ु टुक्राई छातीको तपडा बडेर भाको छु लाि पतहलै। सनु सान मसान घाटमा पघु नलाई हताररँ दै आउ मलामी भन्दै खोलेर लडेको छु दतहलै।
गजल तवयोगको भेलमा डुबेर जीवन बाँचथ्े यो प्यालाको खेलमा भल ु ेर जीवन बाँचथ्े यो। सयु व नझल्ु कँ दै डाँडामा भट्टीततर पसेर मतदराको तेलमा रुझेर जीवन बाँचथ्े यो। लमतन्न सडक भवनमा बेहोसीमै ढलेर मत्ृ यक ु ो जेलमा सतु ेर जीवन बाँचथ्े यो। रहरका ज्वारभाटाहरूमा धतमरा लागेर बन्धनको मेलमा फुटेर जीवन बाँचथ्े यो।
गजल नभन मलाई ददवका गजलहरु लेतखस भनेर नभन मलाई तपडाका आँिु छे तकस भनेर। हाँसो आँिु अतन रोदन सबै लाघछ प्यारो मलाई नभन मलाई कसैको यौवनमा खेतलस भनेर। म खेल्छु तबर् तपउँदै अरूलाई अमतृ तदएर नभन मलाई िहरमा अमतृ बेतचस भनेर। म लेख्छु अरूको किा िब्दलाई धनु ले रँ गाई नभन मलाई िब्दहरूकै घाँटी रे तटस भनेर।
गजल जीवनको तजउँदो लाि गलेको कसरी हेरुँ म तपडै तपडाको डायरी जलेको कसरी हेरुँ म। सनु सान घाटको प्रांगणमा सयु व न'अस्ताउँदै मलामी तबनाको तचता बलेको कसरी हेरुँ म। टप्प तटपेर लैजाने बाँच्ने रहर ती छँ दाछँ दै कालले तदउँसै आँखा छलेको कसरी हेरुँ म। जीवनलाई दोर्ी ठहर गराउँने मत्ृ यक ु ालको तनदवयी अनौठो िासन चलेको कसरी हेरुँ म।
गजल रंतगनमय दतु नयाँ मञ्चमा नचाउँछ आँफैलाई दुःु ख र स:ु खको सरु मा हँसाउँछ आँफैलाई। कतहले आँसक ु ो तालमा त कतहले छालमा मदु ाव झै ँ लमतन्न भएर बगाउँछ आँफैलाई। माया मोह त्यागेर कालको छत्र छाँया तभत्र तनधवक्क भएर आगोमा जलाउँछ आँफैलाई। हो जीवन यही हो सोच कालो पदाव खोलेर अतघन माँझ बलेर मट्टी बनाउँछ आँफैलाई।
गजल माछा तबनाको आलझै ँ सधै ँ खाली भो जीवन पानी तबनाको छालझै ँ यहाँ जाली भो जीवन। सँगसँगै तहँडेर बाटो तबचैमा छोडे पतछ धनु तबनाको ताल झै ँ अपरू ो ताली भो जीवन। तबना सहारा कसैको एतक्लएर बाँच्नु पदाव फुल तबनाको बोट झै ँ एक्लो डाली भो जीवन। चोखो मायामा यहाँ घणृ ाको प्रीत छाउँदा मौसम तबनाको धानझै ँ सक्ु खा बाली भो जीवन।
गजल कसरी हटाउँनु हजरु यादहरू मनबाट हरे क साँझ आँटहरू खतस्कन्छ तनबाट। कसले गयो र यहाँ नचातहँदो छाँट काँट दख ु ेर पोल्छ छाती झछव आँिु नयनबाट। कयौ ँ चोतट मरे र तबउँझन्छु सधै ँ लाि बनेर घाटमा तचताको जलनबाट। हरे क यादहरू पानातभत्र िाँती राखेर बेहोस हुन्छु रातमा मत्ृ यक ु ो लगनबाट।
गजल सक ं टकालमा डुब्या छु मनको बाँध फुटेर गोही आँसक ु ो भीडमा तनको बाँध फुटेर। सम्पतत हदुँ ा आँफ्ना नहदुँ ा पराई भएसी अतस्िपञ्जर गल्दैछन घनको बाँध फुटेर। तदएिे ँ सारा खसु ी आँफु सधै ँ रोगी बनेर त्यही रोगले मदै छु जनको बाँध फुटेर। हरे क रात बैतणीको महासागर तरी रहन्छु बाँच्नलाई सारा तमतेरी पनको बाँध फुटेर।
गजल प्रेम यद्ध े ो लाि म ु को कुरुक्षेत्रमा हारे र बाँचक सारा आफन्तले माया मारे र बाँचक े ो लाि म। पलपल दतु नयाँले कुतल्चएर नांगो सडक झै ँ बेमौसमी फुलझैं आँिु झारे र बाँचक े ो लाि म। नसके र अतग बढ्न नातावादको लडाइमा आफ्नै प्रेमीकाले यहाँ पछारे र बाँचक े ो लाि म। चार जात छत्तीस वणव'को साझा फूलबारीमा छुवाछूतले खाल्टो तभत्र झारे र बाँचक े ो लाि म।
गजल जब म ततमी'लाई सतम्झएर हरा'उँछु सपनीमा एक्लै झतस्कएर करा'उँछु। ओठको लाली अतन निालु नयन कसैले जठु ो पालाव भनी डरा'उँछु। गल ु ाबी अधर अतन भररलो बदन छोलान् कसैले भनी मनमनै बर'बरा'उँछु। ततमी नै धड्कन मेरो जीवन चल्ने म त के वल ततमी'लाई मन परा'उँछु।
गजल घाँटी रे ट्नेहरुकै तभड छ गल्ली गल्लीमा छाती टेक्नेहरुकै तभड छ गल्ली गल्लीमा। कोही हन्ु नन् आपदमा सबै बातहर सररतदन्छन जवु ा खेल्नेहरुकै तभड छ गल्ली गल्लीमा। अरूको कुण्डली हेरेर झटू को खेती गदै यहाँ तचना लेख्नेहरुकै तभड छ गल्ली गल्लीमा। िहरका हरे क कोठीमा मायाजाल बनु ेर िरीर बेच्नेहरुकै तभड छ गल्ली गल्लीमा।
गजल अतत्रप्त प्यास सगं ै रात सम्ु पेर गयौ छुट्नै नसक्ने गरी मात सम्ु पेर गयौ। धल ु ोसरी ई आँखामा तबझाएर सधै ँ भल्ु नै नसक्ने गरी घात सम्ु पेर गयौ। कसाईझैं रे टी माने सारा प्राणीहरूलाई सोच्नै नसक्ने गरी हात सम्ु पेर गयौ। हरे क साि काँच सरी नाता टुटाएर िाम्नै नसक्ने गरी बात सम्ु पेर गयौ।
गजल तबना ताल हँसाउँछौ म हाँस्छु आँसक ु ा भेलहरूमा वा! फे री नचाउँछौ म नाच्छु बेइमानी खेलहरूमा। सववश्रेष्ठ भएर पतन पाउ कमाउँदै मररने डरले वा! सडक समाउँछौ म लाघछु मत्ृ यक ु ा जेलहरूमा। घणृ ाको दगु वन्ध फै लाई प्रेमील जोडी ती फुटाएर वा! आज डराउँछौ म जान्छु ततरस्कृत मेलहरूमा। एउटै रि यात्रामा पाईला अतघ बढाउँदा बढाउँदै वा! तकन अडाउँछौ म चाल्छु तससाका नेलहरूमा।
गजल नछोउ मलाई पाप लाघला बातहर सरे की छु पाररजात झै ँ रातमै फुल्ने रातमै झरे की छु। मलाई जठु ो बनाएर आँफनै बाउ आमाले गाईको गोठ परालमाति तजउँदै मरे की छु। रातै भरी गनाउँने दगु वन्धको खोरतभत्र अछूतोको ररवाज बढ्दा बाँच्न डरे की छु। अरू सत्ु ने मखमलको आिनैमा सतजएर आँफु भने खल्ु ला आकाि मतु नततर परे की छु।
गजल मनको घाउ लक ु ाएर आँखा छोपी कता तहँड्यौ आँिु जतत सक ु ाएर आँखा छोपी कता तहँड्यौ। तपडा लक ु ाई झटू ो मस्ु कान ओठभरर सजाएर तसर सधै ँ झक ु ाएर आँखा छोपी कता तहँड्यौ। खल्ु ला आकािको पंक्षीकै तसद्धान्त अपनाएर बन्धन सारा फुकाएर आँखा छोपी कता तहँड्यौ। प्यास मेट्दै दतु नयाँको आगो लगाई मेरो मनमा चोखो माया चक ु ाएर आँखा छोपी कता तहँड्यौ।
गजल प्रेमको इततहास घणृ ाको मसीले लेख्नेहरु हो औसरवादको घम्ु टो ओढेर प्यास मेट्नेहरु हो। नआउ गाउँदै गीतहरू सरु रला भाकै मा मीठो हाँसेर तनदोर् भावनामा खेल्नेहरु हो। नजोड्नू संबन्ध यगु ौ ँको कसम खाएर फुलको उपहार तदँदै काँडाले छे क्नेहरु हो। गछौ मन्िनहरु पछाडी छुरी लक ु ाएर तसउँदोको तसन्दरू पखाली अगं बेच्नेहरु हो।
गजल फुल तटपेउ फालेउ भईू मा महत्व खोजेनौ ँ हाँगा पात जराको संघर्व कतहलै जोखेनौ ँ। हात मन सबै पापी तनदोर् नयन सबै पापी धतीमा ढली गहु ार माँघने कसैलाई छोडेनौ ँ। उठाउँनक ु ो सट्टा यहाँ धल ु ोसरी टेकी तहँड्छौ आत्मा बचाउ अतभयानमा खै तकन बोलेनौ ँ। प्रेम गयो घणृ ा सम्ु पी सािै छोडी तहँड्छन् आतखर मान्छे सबै एउटै हुन भन्ने सोचेनौ ँ।
गजल गएपतछ फे री यादमा छाँया बनी आउँनु तकन पतू णवमाको जनु जस्तै दायाँ बनी आउँनु तकन। बर्ौ ँबादमा नदीले पतन बाटो मोडी तहँडे जस्तै बघदै फे री खनु सरी माया बनी आउँनु तकन। समन्ु रमा मन्िन हदुँ ै उतै गाँस्नु प्रीती अब सपनीमा घम्ु टो छोपी साया बनी आउँनु तकन। धेरै तदएँ धेरै तलएँ छै न अब तलनु तदनु कपालको झै ँ तबझाउने चाया बनी आउँनु तकन।
गजल जले ँ गले ँ अतन ढलेर रोएँ सनु सान रातमा तपडा प्यारो भयो अतन जमे ँ पौडँदै घातमा। तष्ृ णा तियो यगु ौ ँ यगु सगं सगं ै तहँड्ने मेरो तर टुटे ँ अतन लतु टएँ डुबेर मीठो बातमा। बैरंगी रँ गहरू ती इन्र धनतु स ईन्रेणीझै ँ बनु ेिे ँ कयौ ँ सपनाहरू भल ु ेर सधै ँ मातमा। बाँच्नु छ अब एक्लै बेइमानी नसा तपएर फुलको उपहार सम्ु पँदै उनका ती कोमल हातमा।
गजल अब ततम्रो तदल दख ु ाउँन गीत गजल लेतख्दन म अब ततम्रो तसर झक ु ाउँन एक्लै बाटो छे तक्दन म। द:ु ख सही स:ु ख तदँदा कुतल्चएर तहँड्छौ भने अब ततम्रो गीत सनु ाउँन आँफ्नो स्वर बेतच्दन म। कतत झारे ँ आँसहु रू भदौरे त्यो भेल सरी अब ततम्रो तदन भल ु ाउँन जवु ा तास खेतल्दन म। धन दौलत कमाई ततम्रो काँचल ु ी फे री रहे ँ अब ततम्रो तबल बझु ाउँन साहू माजन भेट्तदन म।
गजल आँखा छली दतु नयाँसँग प्रेम गरे र तहँड्नेहरु हो जताततै यौवनको झटू ो रस छरे र तहँड्नेहरु हो। जे जे गछौ गर मनाउ सहु ागरात भ्याए जतत एता तोडी अकै ततर फारम भरे र तहँड्नेहरु हो। घातै घातको अण्डा पारी चल्लाहरु कोरलीरहु डंग गनाउँदै तदन रात बामे सरे र तहँड्नेहरु हो। कतत गछौ गर ठे क्का पट्टा सररर लटु ाएर तवश्वास सारा कुतल्चएर प्यासमा चरे र तहँड्नेहरु हो
गजल आँिु तपएरै लठ्ठ छु म प्याला नदेउ मलाई बोलायौ त आएँ (चपु चाप)२ ज्याला नदेउ मलाई। प्याला र ज्यालाको महँगो जीवन हैन यो मेरो फे री एकान्तमा (डाकी)२ सनु को बाला नदेउ मलाई। रंगमचं मा अिवतहन रँ गहरूले दतु नयाँको नजर ढाक्दै जठु ा हातले (उतन)२ फुलका माला नदेउ मलाई। टुट्या संबन्ध फे री तसँचाई गनव ती ततम्रा अगं तबचका तसन्दरू पोते (फाली)२ नदी नाला नदेउ मलाई।
गजल आँसक ु ो मल्ू य के हो झारे र त हेर प्रेमको यद्दु मैदान एकै तछन हारे र त हेर। माया र ममताको डोरी चटु्दा कस्तो हन्ु छ प्रेमतबतहन मरुभतू ममा बसाई सारे र त हेर। तपडा क्रन्दन र ददवहरू तजएर हेने भए खेतमा हल गोरुझै आफै लाई नारे र त हेर। तन मनको आँगनीमा तवश्वास छकी छै न आँफनै हातले आँफनै छाती फारे र त हेर।
गजल आउँछु पखव प्याला बोकी सगं ैबसी तपउँला है त तल माति मटु ु जोखी संगैबसी तलउँला है त। ततम्रो प्यास बढ्दै छ रे आज भोतल िाछ मलाई आउँछु पखव ओठ जोडी संगै बसी तजउँला है त। चचं ल्ताको ततम्रो तसमा छाती खोली बाँड्दै छौ रे आउँछु पखव खल्ु ला छाती सगं ैबसी तसउँला है त। अगं अगं जताततै मातको वर्ाव बष्याव छरे आउँछु पखव चाहे जतत सगं ै बसी तदउँला है त।
गजल आज िोरै तपएर आएँ के तस्वकार गछौ तप्रये? मन िोरै तसएर आएँ के तस्वकार गछौ तप्रये? बल्ल तल्ल पाको जीवन ततमीसँगै जनु ी काट्न मात िोरै तलएर आएँ के तस्वकार गछौ तप्रये? तदनैभरी गोरु नारी साउकै खेत जोत्दा जोत्दै ज्यान िोरै तखएर आएँ के तस्वकार गछव तप्रये? धाम पानी नभनेर तहलै तहलो खेली खेतमा साँझ िोरै तजएर आएँ के तस्वकार गछौ तप्रये?
गजल आज सम्म मटु ु मैले कसैसँग साट्या छै न धरोधमव झटू बोली कसैलाई ढाँट्या छै न। ढाँट्या भए पाप लाघला चन्र सयु वको कसम ततम्रै लागी साँच्या माया कतैपतन फाट्या छै न। तहजो पतन ततम्रै तिएँ आज भोतल सधै ँ ततम्रै धड्कन यो ततम्रै नै हो आजसम्म छाँट्या छै न। पतखवराछु दोबाटोमा मनको दैलो खल ु ाएर ततम्रो इच्छा तोडी मैले बाटो एक्लै काट्या छै न।
गजल उनकै यादमा आँसहु रू दतकव एर कतत रोएँ। हरे क खसु ी सडकभरर छतकव एर कतत रोएँ। माया गनवु अतभसाप भो पापी तनमोहीलाई आँफनै सम्झी नतजतकँ दा मतकव एर कतत रोएँ। प्रेमको बदल्ा घणृ ारुपी उपहार पाएपतछ नजरहरू साईनो खोज्दै ततकव एर कतत रोएँ। एकान्तमा छटपटीदा बेहोसीको प्रहरै संगै दख्ु या छाती चट्टानसरी चतकव एर कतत रोएँ।
गजल उपहार के तदउँ तदल तोडी फरार हुने मायालल ु ाई कोमल हातमा बीस छोडी फरार हुने मायालल ु ाई। मटु ु तदन सतक्दन म मन्जरु भए खनु तदउँला तससा झै ँ मटु ु फोडी फरार हनु े मायालल ु ाई। टुट्या तदलमा आगो लाघदा के नै रयो तदने अब रातमा अकै नाता जोडी फरार हुने मायालल ु ाई। छै न नासो तदने अब अतन छै न कुनै गनु ासो पतन सारा साईनो धानझै ँ गोडी फरार हुने मायालल ु ाई।
गजल एक्लो हुन्न जीवन नसामा खनु रहुन्जेल तदयो तनभाएर के ही हुन्न रातमा जनु रहुन्जेल। रहरै रहरमा लाएको माया तोडेर जानेलाई के भनौ ँ आतखर मन भल ु ाइ रहन्छु तबछोडको धनु रहुन्जेल। तसउँदो खाली बनाई मलाई मनबाट हटाए पतन त अभावलाई तमठै बनाउछु कचौरामा ननु रहुन्जेल। स्वािवको आलमा डुब्नेले उष्ण गमी तदएर के ही हुन्न मन ठन्डा पानव सक्छु समाजमा बाँडेको गणु रहुन्जेल।
गजल कतत क्रूर बन्छ मान्छे घाँटी रे टेर माछव प्रेमको नाममा झटू ा प्रेम पत्र लेखेर माछव आतखर िरीरमा बघने रगत एउटै भए पतन भेद भावको कुण्डतभत्र चार पाउ चेपेर माछव । यो धती कसको र के का लागी श्रतृ जत गररयो, तवडम्बना! दईु नयन कालो पट्टीले छे लेर माछव । अरुको तपडामा कतहलै दख्ु दैन मान्छे को मन अकावलाई बलीको बोकोझै ँ वररपरर घेरेर माछव ।
गजल कतहलै सोधेनौ मलाई छाती पोलेको बेला कतहलै भेटेनौ मैले ढोका खोलेको बेला। एक्लै मस्त भयौ प्यासी जवानी लटु ाउँदै तकतहलै छोएनौ कालले तबर् घोलेको बेला। चसु ाई रयौ अगं अगं नघन भई बेहोसीमा कतहलै सोचेनौ मत्ृ यल ु े धावा बोलेको बेला। कयौको ततखाव मेटायौ तचसो सागर बनेर कतहलै रोएनौ तचतामा नौनी मोलेको बेला।
गजल कतहले कही ँ पागल बनेर तचता समाई हाँस्छु खनु पतसनाहरूको आलमा मदु ाव जलाई हाँस्छु। टुटे फुटेका अतस्िपञ्जरहरूको सल्लेकृया गरे र लाि तजउँदो हो या मतृ परीक्षण गराई हाँस्छु। हो म अधव घायल रूपमा घर न घाटको भएर खोलाका मदु ावहरूलाई आहार बनाई हाँस्छु। आकािका तारा तनदाउँछन् तर म तनदाउँतदन तदन रात तसनो उतधन्दै जीवन सजाई हाँस्छु।
गजल तकन आज ततमी मेरो जीवन'बाट फुट्न खोज्छौ सम्झौता नै दाउमा राखी काँच'सरी टुट्न खोज्छौ। कसको आँखा लाघयो बरै चोखो हाम्रो सम्बन्धमा जतत खसु ी तदए पतन उल्टै मलाई चटु्न खोज्छौ। तततमले अकै बाटो मोड्दा सम्हालीनै गारो हुन्छ यात्रा सगं ै गछुव भन्ने तकन आज छुट्न खोज्छौ। हरे क पाना चाहनाका ततम्रो परु ा गदाव गदै तकन साईनो टुटाएर घातै घातले कुट्न खोज्छौ।
गजल मैले भने ँ बाटो नमोड गोली प्रहार भयो म माति बँचक े ो सन्ु दर नाता नतोड गोली प्रहार भयो म माति तछया तछया भयो छाती तरै पतन सम्हाल्दै भने फे री धजु ा पारे र जीवन नगोड गोली प्रहार भयो म माति। गल्यावम्म ढले सडकमा पाउ तघसादै आवाज तदरहे ँ स्वािी त्यो घम्ु टो नओढ गोली प्रहार भयो म माति। बेहोस तालमा घटु ु क्क िक ु तपउँदै घोतप्टएर कराएँ काँचका ती चरु ा नफोड गोली प्रहार भयो म माति। अतन के भयो ?
गजल गोली लागेर लाि भएनी आवाज तदरहे ँ सबैले खेतलने तास भएनी आवाज तदरहे ँ। भईू मा पल्टाईयो मलाई घतृ णत हातहरूले कसैलाई भारी ह्रास भएनी आवाज तदरहे ँ। (पटक)२ रोपीरहे भाला छातीका कुनामा पोखेको दधू झे ैं नास भएनी आवाज तदरहे ँ। झयावम झरुु म जीवन तससा झै ँ फुटेपतछ तनदवयी कालको दास भएनी आवाज तदरहे ँ। त्यसपतछको पररणाम!!
गजल जब जब मेरो आवाज गतु न्जयो सबै हाँस्न िाले मेरो कँु तजएको जीवन देखेर सबै सबै नाँच्न िाले। सोचे ँ मटु ु त एउटै हो (धडक)२ धड्तकने सबैको तर ती पापीहरू उत्सव मनाउँदै तदयो बाल्न िाले। हे ईश्वर यो कस्तो अनौठो मानवता बनायौ ततमीले खनु सबैको उस्तै भएनी धान गोडेझै ँ छाँट्न िाले। पाना झै ँ च्याततयो छाती रूखो बचनको प्रहारले अतन फाटेको छातीमा टेकेर खसु ीयाली बाँड्न िाले।
गजल गम्ु यो तर गमु ने ,गमु रे पतन नगमु क े ो पररणाम हो यो दख्ु यो तर दख ु ेन दख ु ेर पतन नदख ु ेको पररणाम हो यो। खै कसले बझ्ु यो र यो िरीर मट्टीले बतनएको हो भनेर बझु े ँ तर बतु झन बझु रे पतन नबझु क े ो पररणाम हो यो। जन्म,कमव,मरणमा माटो छोई िख ं फुके को सनु ेनौ ँ ? सनु े ँ तर सतु नन सनु ेर पतन नसनु ेको पररणाम हो यो। खाँन्छौ ँ धतीकै अतन िक्ु दै र कुल्चँदै तहँड्छौं उसैलाई िक ु े ँ तर ितु कँ न िक ु े र पतन निक ु े को पररणाम हो यो।
गजल चाहे ततमी मान या नमान मैले पाईला चाली'सके ँ सडक सरी बेहोस तालमा एक्लै बाँच्न छाडी'सके । ततम्रो पत्िर मटु ु सगं अब रहेन के ही गनु ासो मेरो त्यसैले त सन्ु य घाटततर हाँस्दै बसाई सारी'सके ँ । एता संख फुक्दा तेता नौमती बाजा घन्के पतछ अतघन तचता'माति पल्टी दाग'बत्ती बाली'सके ँ । घम्ु टो अतन कफन ओढ्ने एउटै सातहत जदु ावखेरर राजी खसु ी मत्ृ यसु ँग अटुट साईनो गाँसी'सके ँ ।
गजल चन्र मोतहनी रूपै राम्रो बादलु घम्ु टो ओढ्दा'खेरी तसर माति कल्की सरी दईु चल्ु ठो जोड्दा'खेरी। उनी राम्री नयन तडलमा गाजलु ती रे खा कोदाव उस्तै राम्री मस्ु कुराउँदै तकी बाटो मोड्दा'खेरी। कोमल हातको स्पिवले मटु ु सारा घायल पाने माया'रूपी जाल हानी निै निाले गोड्दा'खेरी। ओठमा हाँसो लाली भरी तन मन परु ै हरण गने फै लाएर प्रेमील बासना ब्रम्हा ध्यानै तोड्दा,खेरी।
गजल चाहेर पतन जीवनमा कसैलाई रुवाउँन खोज्या हैन पाउनै पनवु भनेर कसैलाई झक ु ाउँन खोज्या हैन। खसु ीयाली नै बाँड्न चाहे ँ हर पल तभत्र तभत्रै रोएर काँच प्वाट्ट फुटे सरी कसैलाई फुटाउँन खोज्या हैन। आँफैले आफै लाई धरौटी राखेर तहँडी रहे ँ काँडा टेकेर दोबाटोमै प्रेम बेचरे कसैलाई बझु ाउँन खोज्या हैन। हरे क पल मरे र बाँचे जीवनमा कसैको जीवन सजाउँन छातीमा छुरा रोपेर कसैलाई गमु ाउँन खोज्या हैन।
गजल चोखो माया गरे र मत दोर्ी भएँ छु हृदय माँझ झरे र मत दोर्ी भएँ छु। बन्धन सारा यगु ान्त बल ु न्द बनाउँन मीठो सवु ास छरे र मत दोर्ी भएँ छु। सागर'सरी माया पतवत्र पानवलाई मनको बाध तरे र मत दोर्ी भएँ छु। ढुकढुकी चालमा हर बखत सम्झेर यादै यादमा मरे र मत दोर्ी भएँ छु।
गजल चोरी होला है बै ँस ततम्रो जनु को प्रहरमा फोहोरी होला बै ँस ततम्रो पापी िहरमा। नछल्काउ है जवानी त्यो भेल झै ँ उतलवएर घोतप्टएला है बै ँस ततम्रो प्यासी नहरमा। फतक्रएको फुलझैं यौवन नडुलाउ कतैततर तमतसएला है बै ँस ततम्रो तवर्ालु जहरमा। सवु ास छदै नतहँड भो अगं लटु ाई लटु ाई फँ स्ला है कतै बै ँस ततम्रो झटू ो ठहरमा।
गजल जतत टाढा उतत गाडा जब मन छुन्छ तपरानीले सपनीमा आँिु झादै जब मन धन्ु छ तसरानीले। उता एक्लो रात कट्छ एता उस्तै छटपटाई आगो लाघछ मटु ु माँझ जब मन रुन्छ तबरानीले। उनको रूप वक्षस्िलमा अकै हातले छोयो भने प्यास बढ्छ तपरै तपरमा जब मन चन्ु छ तचरानीले। खाली ओठ चञ्चलताको तसउँदो खाली पखावइको आतरु उनलाई अप्नाउन जब मन तन्ु छ तफरानीले।
गजल जीवन तजउने क्रममा कस्तो मोडमा फँ तसयो तपडै तपडाको डोरीले कस्तो मोडमा कतसयो। तहँड्दै जाँदा दोबाटोतबच छातीको दख ु ाइले चीत्कारले भररएको कस्तो मोडमा खतसयो। आफन्त नै जब यहाँ,वैरी बनेर देतखएपतछ अतघपतछ मलामीको कस्तो मोडमा पतसयो। ितकत ई पाइलाहरू बेमौसमले लतु लएपतछ उठ्नै पो नसक्ने गरी कस्तो मोडमा बतसयो।
गजल टाढा हदुँ ा भेल झै ँ आँिु झदाव ततमी याद आउँछौ पागल सरी ततस्वरहरू छदाव ततमी याद आउँछौ। टहटह जनु को ज्योतत आधा रातमा तनयालेर झ्यालबाट बातहर तचहो गदाव ततमी याद आउँछौ। ततम्रो अभाव हर पल यहाँ सहन नै नसके र पल्लाघरे काली नतजक सदाव ततमी याद आउँछौ। मध्य राती सडकतबचमा एक्लै हल्ला गदै तहँड्दा प्रहरीसँग पो जम्काभेट पदाव ततमी याद आउँछौ।
गजल ढाल बनेर आउँछन् अतन ढलाएर जान्छन् रातमा छाल बनेर आउँछन् अतन बगाएर जान्छन् रातमा। यौवन तपपा'सक ु ा झोली झटू ै झटू का तभरी यहाँ माल बनेर आउँछन् अतन गनाएर जान्छन् रातमा। सायद आत्मा लटु्नक ु ो मज्जा बेघलै भएर होला राल बनेर आउँछन् अतन खसाएर जान्छन् रातमा। सववस्व नै सारा हरी तजउँदै सेतो कात्रो ओढाई काल बनेर आउँछन् अतन हराएर जान्छन् रातमा।
गजल ततमी अतन्मएर जाँदा जन्ती माँझ बाजा बजाउँदै तचतामा अतन्मँदै तिएँ म तबदाइको तदयो जलाउँद।ै वा! ततमी डोलीमा चढ्दा पणू क े ो जनु झै ँ खल ु ेर मलामी बीच रम्दै तिएँ म संखको तालमा रमाउँद।ै ततमी सात फे रा घम्ु दै दधू दही अक्षताले पतु जँदा अतघन रापमा जल्दै तिएँ म हर्वका आँिु खसाउँद।ै ततमी प्यासले जवानी लटु ाई'रहँदा सहु ाग'रातमा धती माँझ सड्दै तिएँ म अतन्तम उत्सव मनाउँद।ै
गजल म जात भात भनेर तबतग्रएँ वा! छुवाछूतमा कनेर तबतग्रएँ। चारै लोक मेरै भन्दै घमन्डले वा! तदउँसै तारा गनेर तबतग्रएँ। लालचले भररएको दतु नयाँमा फँ सेर वा! पागल प्रेमी बनेर तबतग्रएँ। प्यास मेट्न पापको छटपटीले वा! पातनतबतहन नहर खनेर तबतग्रएँ।
गजल ततमी जान्छौ पक्कै जान्छौ नजाउ भन्न सतक्दन म एता तोडी अन्तै साईनो नलाउ भन्न सतक्दन म। खै के सोचेर आयौ तहजो आज टातड'एर जान्छौ मलाई लटु ी फे री कतै नछाउ भन्न सतक्दन म। फलोस् फुलोस् ततम्रो जीवन हाँसी खसु ी बाँच्नु सधै ँ फे री सपनीमा याद बोकी नआउ भन्न सतक्दन म। परु ा गर इच्छाहरू जवानीलाई तललामी गदै मै हुँ सन्ु दर भन्दै गीत नगाउ भन्न सतक्दन म।
गजल ततमी त मेरो हदुँ ै हैनौ फे री तकन ढतल्कएँ म ततम्रो मनमा डडेलोझै ँ फे री तकन सतल्कएँ म। ततम्लाई भल्ु न मैले बसाई नसरे को पतन हैन जतत टाढा भए पतन फे री तकन बतल्झएँ म। ततस्वरहरू ततम्रा सबै सलाई कोरी जलाई रहे ँ तरै पतन यादै यादले फे री तकन झतल्कएँ म। कस्तो माया तदयौ हेर नसातभत्र दौडी रहने िाछ ततमी अकै की हौ फे री तकन पतल्कएँ म।
गजल ततमीले तजतेउ मैले हारे ँ प्रेमको सन्ु दर नगरमा एतक्लएर आँिु झारे ँ एकान्त यो िहरमा। अमतृ तपउँदै तहँड ततमी एता तबर् तपलाएर दोर्ी भई बाँच्नु पयो झटू ै झटू को नजरमा। कतहले गरे उ छुरी प्रहार छाती माँझ तेस्यावएर लल ु ो भई तहँड्नु पयो बेइमानी लामा लस्करमा। चोखो माया गदाव गदै झटू सम्झी ततकव एपतछ तजउँदै आज जल्नु पयो सनु सान खोली बगरमा।
गजल ततमी फुल मन्जरु ी फुलकी रानी मटु ु माँझ राज गने धनु की रानी। कै ले जनु तारा बनेर हाँसी तदन्छौ िाहै नपाई मनै हने सरु की रानी। कै ले मलम पट्टी बन्दै नाची तदने दख ु छने कुलकी रानी। ु हरी सख कै ले अतघन परीक्षाको रापमा बल्दै तसता बनी अतघ सने यगु की रानी।
गजल ततमीलाई मीरा हैन राधा बनाई हराउँछु म पछ्यौरीको घम्ु टो ओढाई फुल सरी सजाउँछु म। तकन पयो बन्नु ताज महल मात्रै साि तदए पघु छ दख ु तमलाई रातको जनु सरी हँसाउँछु म। ु सख धडक धडक धड्की रहने मटु ु मा राखी ततम्लाई प्रेमील जोडीको पल ु पल ु नेरी धमनीझै ँ बनाउँछु म। चाहेपतछ जे जे हुन्छ प्रेमको बन्धन कसेपतछ अतक्सजन झै ँ निातभत्र ततमीलाई चलाउँछु म।
गजल ततम्रो रूपमा पतल्कएर साँच्चै म त बेहाल भएँ पहाड जस्तै ढतल्कएर साँच्चै म त बेहाल भएँ। साि तदयौ मात तपयौ ततम्रै प्यास बजु ाईरहे ँ हर पल जलझै ँ छतल्कएर साँच्चै म त बेहाल भएँ। खसु ी सारा बाँड्दै आज दतु नयाँको नजरमा त्यो मनतभत्र सतल्कएर साँच्चै म त बेहाल भएँ। तजउँने मने एउटै पिमा नबझु रे बाचा गदाव तवश्वास घातले टतल्कएर साँच्चै म त बेहाल भएँ।
गजल िर बेचे ँ घर बेचे ँ बेचे ँ प्रेमका डालीहरू यस्तो लाघयो तवश्वासघातका तकन लाउँनु बालीहरू। मतन्दर,गम्ु बा,मतस्जद धाएँ प्रेम कतै भेतटएन प्रेमनै नपाइने मतू तव पज्ु न कतत बोक्नु िालीहरू। धतीसँग संझौता गरे ँ असल सािी खोज्छु भनी काँडा जस्तै च्वास्स घोच्ने मात्रै भेटे ँ जालीहरू। खाली पाउ काँडा टेक्दै प्यास मेट्न दौतड रहे ँ तर पानी फकावई रातमा सक ु ाई तदए नालीहरू।
गजल तदलको कुनामा आगो लाघयो मैले बास गदाव लाईयो कफ्यवु बाटो घाटोमा मैले खास गदाव। हगं ामा भो राजधानीमा प्रेम पत्र जलाइयो वा ! प्रेमीहरू एक जटु भई उठ्ने सास गदाव। फुटे कततका मटु ु कतत नसा'हरू कातटए ससं दतभत्र प्रेमको नयाँ सतं वधान पास गदाव। तोडफोड भए कुसीहरू प्रेमको साझा बहसमा लेतखएन प्रेमील सतं वधान बडाको आस गदाव।
गजल नदीको तचसो पानी तपएर माया लाएको मैले सववस्व सारा उनैलाई तदएर माया लाएको मैले। अज्जै ताजै छ ओठ'मा चबंु न तलँदाको पल साँच्चै संगै स्वास तलएर माया लाएको मैले। अनहु ार नै तफक्का हुन्थ्यो साँझमा भेट नहदुँ ा मानौ ँ छातीमा छाती तसएर माया लाएको मैले। िान्त त्यो जनु ेली रातमा दईु टै धड्कन जोडेर तबना डर पक्षीझैं तजएर माया लाएको मैले।
गजल नया यगु नयाँ ढाँचा नयाँ रीतको रंगमा रमाउ तबहानीको कोमल कन्चन तसतको रंगमा रमाउ। फुलझैं फुली सारा धती जनु ले झै ँ पररक्रमा गदै मनको राज्य चलाउँन तजतै तजतको रंगमा रमाउ। नझक ु औँसीको रात बनी ु कतहलै पाउमा परी नलक यगु ौ ँ यगु साि तदने अिल तमतको रंगमा रमाउ। कोइलीले झै ँ कुहु कुहु कोतकल मधरु भाका हाल्दै सरु तालले भररएको मीठो गीतको रंगमा रमाउ।
गजल पागल भएरै होला पलपल भाघयले ठगेको घायल भएरै होला अधरु ो प्रेममा बगेको। टुतक्रएर कमव सारा तससा झै ँ झयावम्म फुटेपतछ बेहोसीको माततभत्र छु म आज तगेको। रहर ती मेरा तदनका अतन रातका सब हरे र उद्देश्य हीन सरुु ं गतभत्र कालले डोयावई लगेको। फँ सेछु यसरी आज म पानी तबनाको सागरमा उल्का बसावतसँगै तालको सतहमा छु डगेको।
गजल तपडाले पोल्दैन भन्छन् तपएर तजउनेहरुलाई काँडाले घोच्दैन भन्छन् तसएर तजउनेहरुलाई। सडकमा लडेका ती मान्छे लाई छोएरै सोधे कतहलै नदख्ु दोरहेछ तखएर तजउनेहरुलाई। झरी घामले नछुदो रहेछ तदन रात कतहलै ढुकढुकीमा िोरै सास तलएर तजउनेहरुलाई। भगवानले डाकी स्वगवमा सम्मान गदाव रहेछन् आँफनै मटु ु कसै'लाई तदएर तजउनेहरुलाई।
गजल फलेको बाली देखेर,भतु क्ु कै हुन्छन् लाचारीहरू फुलेको डाली देखेर भतु क्ु कै हुन्छन् लाचारीहरू। हररयाली कतैततर देख्नै हन्ु न पापी नयनले जवान साली देखेर भतु क्ु कै हुन्छन् लाचारीहरू। बैि छँ दा स्याल पतन घोले भने जस्तै आज तसउँदो खाली देखेर भतु क्ु कै हुन्छन् लाचारीहरू। जबरजस्ती सम्बन्धमा खाली ठाउँ भनवलाई ओठको लाली देखेर भतु क्ु कै हुन्छन् लाचारीहरू।
गजल बल्ल बल्ल पाएको जीवन बँचाएर राखे कसो बल्ल तल्ल लाएको माया सजाएर राखे कसो। यात्रा हो यो तजन्दगानी ठे सहरू लागी रहन्छन् चोटको कम्पन छातीतभत्र दबाएर राखे कसो। होस गनवु बाटो घाटो यात्री भेट्दा एकान्तमा बोली बचन अमतृ सरी बनाएर राखे कसो। ठूलो सानो धनी गररब नभनेर कतहलै पतन मटु ु माँझ प्रेमको तदयो जलाएर राखे कसो।
गजल मन्द मस्ु कानतभत्र कतत खोटहरू हुन्छन् याद गर परे ली माँझ अनेकौ ँ दोर्हरू हुन्छन् याद गर। मीठो नम्र बोली कोतकल कण्ठमा बोल्नेहरुको लालीले छोप्या झटू ा ओठहरू हुन्छन् याद गर। प्यास मेट्न मध्य रातमा कोमल हातले समाएको प्यालाभरर जहररलो झोलहरू हुन्छन् याद गर। आलीिानमा सतु ेर कुरा काट्दै बाटो छे क्नेहरुको साँच्चै मनतभत्र नमीठा भोकहरू हुन्छन् याद गर।
गजल मनु ा र मदन झै ँ माया गरे र देखाउँन सक्छु म तदलको कुनामा यौवन छरे र देखाउँन सक्छु म। हल्ला तपट्दै तहँड्तदन म कहीलै गल्ली गल्लीमा खाली तसउँदोमा तसन्दरू भरे र देखाउँन सक्छु म। आगो लगाँउन चाहन्न सम्बन्ध तससा झै ँ टुटाउँदै सम्बन्ध जोड्न सेती पल ु तरे र देखाउँन सक्छु म। मेरो पतवत्र प्रेमलाई सदैव जीतवत बनाउँन रावणले तसता हरे झै ँ हरे र देखाउँन सक्छु म।
गजल सके हाँस्छु नसके त रुँदै मन बझु ाउँला आँसक ु ा फुलै फुलले धँदु ै मन बझु ाउँला। प्रेमको बदल्ा घणृ ै घणृ ा तमल्छ भने यो जनु ीमा घातको अतघन ज्वाला पाउले छुँदै मन बझु ाउँला। जतत माया तदए पतन तपडा ददव हुन्छ भने उही खरको झपु डी झै ँ चदँु ै मन बझु ाउँला। एता टाल्दा अनायासै अकावततर फाटेपतछ तजउँदै भए तन मरे तल्ु य हदुँ ै मन बझु ाउँला।
गजल मेरो देि खै कहाँ छ भनेर कतहलै नरुनु ततमीले। धती हो साझा सबैको एक्लो नहुनु ततमीले। जहाँ टेक्छौ सम्झ त्यही त हो हाम्रो देि (देि)२ भन्दै आँसल ु े नयन नधनु ँु ततमीले। इततहास मदैन कतहलै िब्द उठे र बोल्छन् प्रेमले दतु नयाँ जगाउ तहसं ा नछुनू ततमीले। भार्ा संस्कृतत बँचे हुन्छ जीवन उज्यालो बाटो भल ु ेर कदातप पातझै ँ नकँु नु ततमीले।
गजल यो जीवनमा ततमी आयौ सरु सगं ीत धनु बनी यस्तै मस्ु कान भदै छाउ महँगो त्यो सनु बनी। सक ु न्द नभई हाम्रो माया मछव भन्ने ं ा तियो बल तर हरे क निातभत्र दौडी तदयौ खनु बनी। पवू व पतिम उत्तर दतक्षण चारै तकल्ला (घमु ी)२ औँसीको त्यो रात तचदै ततमी आयौ जनु बनी। धततव माँझ खसु ीयाली एकताको तबगल ु फुक्दै प्रेमको पाठ तसकाउँदै छायौ सधै ँ गणु बनी।
गजल यादै यादले रे समी तदलको बगरमा खसे ँ म तबतसवएर मोतहनी रूपको दलदलमा फसे ँ म। धड्कन माँझ जलन बढ्दा ततखाव मेटाउँन तड्तपएर दईु वदनको तलाउमा पसे ँ म। चाँदनी रातमा गन्दै तझतलतमली ताराहरू प्यासी बनी उनको मीठो पखावइमा बसे ँ म। फुलको तदलमा आगो हुन्छ भन्ने नजानेर वा! झटू ै झटू को फोहोर जवानीले डसे ँ म।
गजल यहाँ बाँच्नक ु ो अिव टुट्यो जब प्रीत नलाएसी उनले यहाँ नाँच्नक ु ो अिव लटु्यो जब गीत नगाएसी उनले। रंगमन्चमा रँ तगदैं जाँच्दै तिएँ म उनको चमकलाई तर जाँच्नक ु ो अिव छुट्यो जब तजत नपाएसी उनले। ईन्रेणी रंगमा साँच्दै तिएँ म उनकै रीतत तिततलाई तर साँच्नक ु ो अिव चटु्यो जब रीत नछाएसी उनले। बारुले कम्मर भाँच्दै तिएँ म उनकै नतजक खल ु ेर तर भाँच्नक ु ो अिव फुट्यो जब तमत नचाएसी उनले।
गजल यहाँ त आफ्नू होइन अकावलाई हेररँ दो रहेछ जो छ होचो उसैलाई बारम्बार के ररँ दो रहेछ। तबद्वानका बाँणीहरु मात्रै लेतखने यो धतीमा वा तनधावको आवाज यहाँ क्रूरताले बेररँ दो रहेछ। ओठभरर मस्ु कान बोकी पतछ छुरी चलाउँनेको सपवले काँचल ु ी फे रे झैं व्यवहार नै फे ररँ दो रहेछ। मान्छे को जातै कस्तो स्वािवका नारा लाउँदै गाँस बास खोस्दै यहाँ धर'हरू धेररँ दो रहेछ।
गजल मैले माया लाएको मान्छे अन्तै'ततर जमेपतछ कसरी पो बाँच्नु अब रातमा उतै रहेपतछ। एता छट'पटीले पोल्छ उता सहु ागरात मान्दा कसरी म हाँस्नु अब चोखो माया जलेपतछ। उनी हदुँ ाको रात अतन नहदुँ ाको रात सम्झी कसरी म नाँच्नु अब तपडाले पाउ सडेपतछ। मीठो साईनो तोडी जब अकै ततर जोड्दाखेरर कसरी म टाल्नु अब तजउँने रहरनै मरे पतछ।
गजल मैले त हारे ँ हारे ँ ततमीले तजतेर खै के पायौ संबन्धका ती कुले ँिाहरु घणृ ाले तसँचरे खै के पायौ। दोर् जतत मलाई सतु म्प तनदोर् बतन आफु हास्दै चोखो कन्चन माया तोडी झटू ो तकनेर खै के पायौ। म यद्ध ु हारे को मान्छे हार खाँदै बस्न रमाउँछु मलाई दस्ु मन ठहयावई अकै सगं तमलेर खै के पायौ। खाली हात आयौ ँ जन्मँदा मदाव खाली हात जानछ ु यती बझ्ु दा बझ्ु दै सनु माति तहँडेर खै के पायौ।
गजल हे धततव हुरी बतास पठाई दे मनव लागे ँ बचाइ दे बढ्दो छ घणृ ा जताततै पखाल्न भेल पठाई दे। यहाँ भगवान छै नन् पक ु ार सनु ाउँ म कसलाई सक्छस् त हात समाई दे नत्र धड्कन चलाई दे। हरे क तदन ढल्दछन् सडकमा रहरहरू तपडाले सक्छस् त माति उठाई दे नत्र अन्त्य गराई दे। पदेिीएको छोरो आउँदा बाकसभरर धन तलएर सक्छस् त आगो लगाई दे नत्र लाि जगाई दे।
गजल यो कुनै यद्ध ु मैदान हैन हेर हर पल यद्ध ु गररने यो कुनै भट्टी हैन प्यालाभरी सोमरस भररने। यहाँ त िजृ नतिल फुलहरू फुल्नपु छव (सदा)२ यो कुनै आयव घाट हैन बगरमा सतबीउ छररने। सतकन्छ त आउ हातहरू बढाउँ सद्भावका यो कुनै रंगमचं हैन यौवन सरी प्यास हररने। नगरे हुन्थ्यो अि ं बण्डा सातहत्यको नाममा यो कुनै पेवा घडेरी हैन या त कोठा सररने।
गजल पतहचान के हो भनी भोतलका तपडीले सोध्छन् पक्कै कतहले र कहाँबाट आयौ ँ भन्दै इततहास खोज्छन् पक्कै । यो ठट्यौली अतन कुनै वादतबबादको समय हैन हेर सत्यताको उजागर भएन भने अब बाटो मोड्छन् पक्कै । अस्त व्यस्त छ समाज पतहचानको साँचो हराए'पतछ आरोप छ श्रीमानलाई अब आफ्नैले तिर फोड्छन् पक्कै । देि छोड्यौ ँ भेर्संगै िरण तलयौ ँ गाँस बासका लागी समु ागव देखाईएन भने अब आफ्नै आयु तोक्छन् पक्कै ।
गजल मैले पठाएको पत्र खै ततमीले नपाएकै भान भयो मेरा अपहरीत िब्दहरू ततमीले जलाएकै भान भयो। यो मनमानी करणले एता दख्ु दा तेता हाँस्यौ होला यहाँ भावनामा लगाम ततमीले लगाएकै भान भयो। कलमलाई मसी तपलाई अक्षरहरू जोडी पठाएँ ओफ! तीनै अक्षरहरू ततमीले दबाएकै भान भयो। तठकै छ महािय तनमख ु ा अक्षरहरूको हत्या गरे र मेरा हातमा लािहरु ततमीले िमाएकै भान भयो।
गजल कोही त पागल भए यहाँ प्रेमको निा बडेर कोही चै ँ घायल भए यौवनको हावा चलेर। सझं नाको भारी बोक्दै सत्ु छन् एक्लो रातमा सायद कसैको यादमा नयनतभत्र आँिु भरे र। तकन बेहोस छौ भनेर सोध्नक ु ो अिव नै हदुँ नै जब उदास बनेर सझं न्छन झ्यालमा बसेर। कसैको यादमा डुब्नु भनेको प्रेम फुलाउँनु हो बगै ँचाका पतू 'लीझै ँ सप्तरंगी रंगमा रमेर।
गजल तबवस छु ततमीले मेरा अक्षरहरू जलाए देखी आवाज हरायो मसँग कसैले प्रीत नलाए देखी। आँसक ु ा नतु नला फुलहरू झरररहे दईु नयनबाट जब मेरा िब्दहरू बलात्कृत गरे र गलाए देखी। ऐठन पाछव हरे क रात दबाइएका ती आवाजले मेरो कलमको आत्मा नै तनचोरे र ढलाए देखी। अब त तबद्वानहरुको सारा तवश्वास नै टुतट सक्यो कला र सातहत्यको नाममा छुरी चलाए देखी।
गजल कतत सहनु तपडै तपडा अतन चकी रहने घाउहरू लाघछ सबै डुब्न लागे मेरा तजन्दगीका नाउहरू। जब छाती दख्ु छ बेजोडले एकोहोरो मटु ु को कम्पनसंगै ितकत यो िरीर तबसाउँन रहेनन् समतल ठाउँहरू। यो प्रेमतबतहन यद्दु मैदानमा खै कता जाउँ अब कतै रहेनन् मलाई आश्रय तदने गाउँहरू। साँच्चै एक्लो भएँ छु म सहारा छै न कसैको आतखर बाँच्नकै लागी यहाँ राख्दैछु काँडामाति पाउहरू।
गजल स:ु ख द:ु ख बाँडौं है भन्दा पाप भयो कसैलाई मीठो बोली बचन आज श्राप भयो कसैलाई। नसोचेको हदुँ ो रै छ अनौठो यो दतु नयाँमा चोखो प्यार तदँदा नमीठो ताप भयो कसैलाई। आँफ्नो सोच्दा आफन्तलाई घात गरे ँ की त एउटा िब्द के बोले ँिे छाप भयो कसैलाई। तकन बन्छन् मान्छे स्वािी साईनो परु ै तचस्याएर मनका कुरा खोल भन्दा कर'काप भयो कसैलाई।
गजल ततमी सगं एकै रात तदल जोड्ने चाह बढ्यो अगं चम्ु दै एकै तछन धड्कन रोक्ने चाह बढ्यो। लजालु ती मस्ु कानहरू जतन गरी सम्हालेर ओठभरर सवु ास छदै यौवन पोख्ने चाह बढ्यो। ततम्लाई छुन हरे क रात सपनीमा धेरै धाएँ अब तदनमै फुल बट्टु े चोली खोल्ने चाह बढ्यो। ततम्रो मेरो संबन्धका चचाव चलीराछ िहरभरी त्यसैले त पछ्यौरीले घम्ु टो छोप्ने चाह बढ्यो।
गजल साि तदने अतन छोड्ने माया नै हो ससं ारमा कतहले दईु मटु ु जोड्ने माया नै हो संसारमा। तहम नदीझै ँ पतघल तदने मन खसु ी हदुँ ा अनायासै कतहले सारा नाता तोड्ने माया नै हो ससं ारमा। माया भन्ने चीजै यस्तो हाँसो आँिु सबै तदने| कतहले रातमै बाटो मोड्ने माया नै हो ससं ारमा। मीठा कुरा गछव न् कतहले बासना छदै चम्ु बन सरी कतहले झटू ो घम्ु टो ओढ्ने माया नै हो ससं ारमा।
गजल सबं न्धका झोलगंु े पल ु हरू तोडेर जान रै छ सम्झनाका कोमल फुलहरू गोडेर जान रै छ। उनको त्यो हाँसो तहजोको पणू क े ो चाँदनी झै ँ छाती'तभत्र तीखा सल ु हरू छोडेर जान रै छ। तहजो सँगीका काखमा मीठा गीत गाउँदै तिन आज तबदाइमा स्वेत तल ू हरू ओढेर जान रै छ। मारुनीको मीठो तालमा नाँच्दै तिन सपनीमा मलामी'हरुका लामा हूलहरू मोडेर जान रै छ।
गजल सागर तरे र जान्छौ कहाँ फतकव आउ न तबन्ती आँिु छरे र जान्छौ कहाँ फतकव आउ न तबन्ती। म तभत्र ततमी छौ तततमतभत्र म छु छोएर त हेर बसाई सरे र जान्छौ कहाँ फतकव आउ न तबन्ती। मायाकी खानी आँखाकी नानी ततमी हौ ज्ञानी फुलझैं झरे र जान्छौ कहाँ फतकव आउ न तबन्ती। तसउँदो सजाएँिे ँ ततम्रै स्वीकृतत पाएर मैले तनमन हरे र जान्छौ कहाँ फतकव आउ न तबन्ती।
गजल हेने नजर राम्रो होकी सोच्ने नजर राम्रो साँच्चै भनौ ँ भने ततम्रो लाली अधर राम्रो। च्वास्स दख्ु यो तदलको कुना बाँडै हानेउकी बाँड हान्ने यो तदल माति ततम्रो रहर राम्रो। उठ्नै गारो बस्नै गारो ततमीले खै के गरे उ सम्झी सम्झी बेहोस पाने ततम्रो कदर राम्रो। छुन भनी नतजक आएँ करे न्ट छोडेउ हातमा आउँनलाई स्वीकृतत चातहने ततम्रो नगर राम्रो।
गजल आजको तदन पतवत्र कुिे औँसी यो बजु ीकन स्नान गरी चढाएँ कुि लौ सबेरै उठीकन। कुिै औँसी गोकणे औँसी जसो भने पतन हनु े संस्कृतत परम्परा जोगाउँ सबले एकभै जटु ीकन। द:ु ख सही हुकावउँने आतखर तपता महान सबका ढोगी आिीवावद तलनु पदवछ पाउमा सबले झक ु ीकन। द:ु ख तपडाहरू सबै भल ु ेर खसु ी भएर आज िमाउँ उपहार तपताको हातमा प्रेमले चमु ीकन।
गजल अब ततम्रो नजरमा दोर्ी बनेर कतहलै भेट्तदन म एकलौटी मायामा अनौठो खेल पतन खेतल्दन म। दोबाटोमा (लक ु ी)२ कमाउँन बदनामी ईनाम त्यो अब ततम्रो नाममा गीत गजल कतवता लेतख्दन म। (तहक्क)२ बडु ु ल्कीको सौगात तलएर एकान्तमा अब ती कोमल हातहरू समाउँन बाटो छे तक्दन म। हटाउँदछ ै ु ततम्रो ततस्वर यादहरूका ती तभत्ताबाट अब प्रेमको नाममा आँफैले आँफैलाई बेतच्दन म।
गजल समयसँगै यगु बदत् लयो तर मेरो रहर बदत् लएन टुटे फुटेका सपना सजाउँने मेरो िहर बदत् लएन। आकाि धती जताततै तचरा तचरा पादै आज उल्का बसावत बतर्वए पतन मेरो प्रहर बदत् लएन। मरुभतू म उववराले हररयाली इन्धन पाए पतन अतस्िपञ्जर तसँचाई गने मेरो नहर बदत् लएन। यात्राभरर कतत भेटे ँ अमतृ बोकी तहँड्ने तर प्यालाको त्यो जीवन हने मेरो जहर बदत् लएन।
गजल के के माँघछौ माँगे जतत कहाँ तदन सक्छु र म ततमी बाट सोचे जतत कहाँ लीन सक्छु र म। तलनु छै न धन दौलत न्यानो माया पाए पघु छ ज्यानै सारा सम्ु पी मटु ु कहाँ तसन सक्छु र म। कसो भनौ ँ कसो गरौ ँ त्यो ज्यान खसु ी बनाउँन एकान्ततबच मझु ीएर कहाँ तजन सक्छु र म। तलनु तदनु जतत जे भो बाँध तोड्नु हुन्न कै ले यादै यादमा तड्तपएर कहाँ तपन सक्छु र म।
गजल भाघयमा जे छ पाइन्छ नै तर डोको निापौ ँ छै न त के नै भयो र पाईला मोडेर नभागौ ँ। चाहे धनी होस या गररब सासै त हो चातहने महल होस या झप्रु ो क्रोधका आँिु नझारौ ँ। सम्पन्नता र तबपन्नताको तीखा आवाजहरू अबोध पतवत्र मनतभत्र भरे र कतहलै नबाँचौ ँ। हामी त अधव नघन जन्मेर स्तन चस्ु दै हुकेका सनु े आिनमा बस्ने हो गररब देखेर नहाँसौ ँ।
गजल म कतत कमजोर छु नतजक नआए हुन्छ मेरो लागी अब प्रेमील गीत नगाए हुन्छ। मनतभत्र हरु ी चल्दैछ छाती फुट्नै लाघया छ तसफव दईु तदनको लागी कसम नखाए हन्ु छ। तदन तदनै म मरररहेछु मलामीले घेररएपतछ के वल लाि हेनव बगरमा माया नलाए हुन्छ। सक्छौ त बाँच एक्लै ईन्रेणी रँ गहरू भरे र अनौठो मत्ृ यक ु ो िहरमा अब नधाए हन्ु छ।
गजल लालीगरु ाँस सगं कतै नझमु रे ै आएँ तववि भई झयाव आँिु नपछु े रै आएँ। रहर तियो नेपालको चारै तकल्ला डुल्ने मेची महाकाली कतै नडुलेरै आएँ। कतहले तबपनी त कै ले सपनीमा रुँदै यात्राभरर याद आउँदा नसतु ेरै आएँ। डाँफे चरी गाउँदै तियो नेपालीको गीत तबमानको ढोका लाघदा नसनु ेरै आएँ।
गजल बल्ल आज जरु मरु ाउँदै सवु ास छदै आए जस्तो तहजो'काती अपरु ा सपना परु ा भई छाए जस्तो। मरीसके का इच्छा सारा बौररएर उठे उठे अब त्यसैले त मदु ावले पतन घाटमा मख ु बाए जस्तो। लाघथ्यो फुल रोतपयो मात्र फुली बास्ना तदने हैन तर पररश्रमको गीत आज मनले गाए जस्तो। सक ं ा तियो पनु वावस यो त्यसै तबतलन हुन्छ भन्ने तर आज खसु ीको िन्देस दतु नयाँले पाए जस्तो।
गजल मैले तलएको प्याला ततमीले पतन तलए हुन्थ्यो मैले तजएको जीवन ततमीले पतन तजए हुन्थ्यो। प्यालाले जीवन चल्या छ प्याला नै प्यारो मलाई जहर भरे र प्यालामा मलाई पतन तदए हुन्थ्यो। नयन तडलबाट झरे का आँिु तपउँदै बाँच्याछु यस्तै तटलतपल आँसहु रू ततमीले पतन तपए हुन्थ्यो। खक ु ु रीको धार तखए झै ँ कतत तखएँ पत्तै भएन यसरी कतहले कही ँ ततमीले पतन तखए हुन्थ्यो।
गजल नेपालीले नेपालीलाई तचन्नै छोडे यहाँ ततकव एर अन्जान हदुँ ै बाटै मोडे यहाँ। नमस्कार गदाव खेरी सरी भन्दै तहँडेपतछ पख ु ाव देखी चली आको नाता तोडे यहाँ। दाई भाई भन्ने चलन,Bro मै साटी खाए मोरी छोडी गोरीसँग साईनो जोडे यहाँ। गाउँ घरमा जप्ने रामका भजनहरू (छोडी)२ तल्ला घरको नक्कल चोरी सस्ं कार फोडे यहाँ।
गजल रुँदै छरे जन्मभतू म तनरंकुश्ता बढ्द'ै जाँदा गाउँघर जताततै तबर्का धारा जड्द'ै जाँदा। चौतारी र भन्ज्यांगहरु आँिमु ा डुब्या छनरे पाटीपौवा घर धरु ी तमरतमरे मै डढ्द'ै जाँदा। राम बद्ध ु तबविभइ िोकाकुलमा पयाव छनरे स्तपू ा र मतन्दर सारा अत्याचारले लड्द'ै जाँदा। चाडपवव रीतततितत कलेजीझैं गल्या छनरे पतहचान र सस्ं कृतत पततगं रझै ँ सड्द'ै जाँदा।
गजल देि रोयो जन्ता रोए बद्ध ु चाँडै आई देउ धैयवताको तबगल ु फुक्दै िातन्त छाई देउ। सगरमािाको आँिु बघदा तराई परु ीयो रोइ रहेछन् जन्ता सारा मलम लगाई देउ। ढल्यो हेर धरहरा उस्तै भयो स्वयंभू पतन मरी रहेछन् परु रएर तबन्ती बद्ध ु बँचाई देउ। सक ं टकालको यो घडीमा हातेमालो गदै आउ बद्ध ु तवनाि रोक्दै तदयो जलाई देउ।
गजल भगू ोल हल्लाएर तहस नहस नगर न प्रकृतत ततमी प्राणीका आँखा माँझ आँिु नभर न प्रकृतत ततमी। िाहै नपाई आउँछौं तकन रुवाबासी मचाँई जान्छौ दतु नयाँको प्राण तलँई जीवन नहर न प्रकृतत ततमी। आज फे री धरहरा र स्वयभं ल ू ाई हल्लाई गयौ हर पल सक ु नछर न प्रकृतत ततमी। ं ट छाउँदै ननु चक सन्ु दर िान्त हररयाली घर सडक ध्वस्त पादै तबन्ती द:ु ख तदन घतीततर नझर न प्रकृतत ततमी।
गजल असार गयो पन्रसगं ै दही जमाई'एन साईली व्यस्त यो िहरमा हलो समाई'एन साईली। बेठी लायौ होला तेता रमाएर तहले गीतमा तर एता गाउँकै यादले कै लै रमाई'एन साईली। पन्चे बाजा नौमतीमा रोपाइँ गयाव याद आउँदा परदेिमा रोतगएर पैसा कमाई'एन साईली। छुपु छुपु रोप्यौ होला खलेगरो बाउसे संगै तवदेिमा हात'भरी बीउ िमाई'एन साईली।
गजल तजन्दगानी यो ढलेपतछ आउँछु कृष्ण ततम्रै सामु आम्दानी सारा झरे पतछ आउँछु कृष्ण ततम्रै साम।ु ऐले सम्म त खसु ीनैछु कृष्ण ततम्रै आिीवावदले अतन्तम सास हटेपतछ आउँछु कृष्ण ततम्रै साम।ु जन्म/कमव संगसंगै ममव बझ्ु ने आत्मज्ञान तदयौ अब सररर सडेपतछ आउँछु कृष्ण ततम्रै साम।ु तबरानो हदुँ छै दतु नयाँ यो ढतल्कएको घामसँगै आँखामा जालो जमेपतछ आउँछु कृष्ण ततम्रै साम।ु
गजल कृष्णजी भन्नहु ुन्छ आऊ एतैततर बाँसरु ी बजाएर गोतपनीसंगै माया लाऊ एतैततर बाँसरु ी बजाएर । लैना गाई धेरै छनरे मिरु ाको चउरभरर भरी कृष्ण भन्छन् दधू खाऊ एतैततर बाँसरु ी बजाएर। हररयाली तब्रन्दाबनमा आउ है घर बनाउ भन्छन् आँट भए राज्यै चम्काऊ एतैततर बाँसरु ी बजाएर। तपडाहरू बढाएर हुन्न घरबार भन्छन् मलाई तबहे गर घर ब'साऊ एतैततर बाँसरु ी बजाएर।
गजल तसन्दरू पोते ततलहरीमा श्रीमतीको ढाल बेघलै तीजको भाका लैबरीमा श्रीमतीको चाल बेघलै। पोहोर साल परार साल भन्दा पतन यो ततजैमा (छम्मा)२ पाउजु बज्दा श्रीमतीको ताल बेघलै। रँ तगएर सािीसँग ईन्रेणीझै ँ त्यो रंगसरी रातो साडी सप्को मादाव श्रीमतीको हाल बेघलै। छुँदै पतन दाग लाघने अप्सराझैं सतजएकी मयरू पख ं ी के िरासीमा श्रीमतीको छाल बेघलै। मन्द मस्ु कान गाजलमु ा चन्रमा झै ँ अतन्मएर साँच्चै नै यसपाली त श्रीमतीको साल बेघलै।
गजल हररयाली गाउँघर छोडी िहर पसेर तबतग्रएँ चन्दन त्यागेर सरररमा ट्याटू छापेर तबतग्रएँ। बाले भन्दै तिए छोरा परदेि पसेर देि नभल्ु नू त्यस्तै भयो स्वदेिलाई पाउमा राखेर तबतग्रएँ। तहँड्ने बेला आमा भन्दैतिन धमव कमव नछोड्नू तर आज पतहचानलाई डलरमा साटेर तबतग्रएँ। फतकव एर घर पघु दा घर सनु सान घाट झै ँ तियो बल्ल िाहा पाएँ घमन्डले तसमा नाँघरे तबतग्रएँ। देिलाई हाँक्न सक्िें मैले त के ही गनवु पथ्यो तहजो त म अन्जान तिएँ तर आज जानेर तबतग्रएँ।
गजल अनपढ पत्िर मतन्दरमा कसरी पघु यो सोच्दैछु त्यही पत्िरसँग तवद्धान तकन झक्ु यो सोच्दैछु। हामी सन्ु दर अनहु ार हेछौ तभत्री मन हेदनै ौ ँ तर गल ु ाबले काँडालाई तकन चन्ु यो सोच्दैछु। साँझमा जनू लाई गहु ार माघदै सतु ेको गगन एकातबहानै फे रर कसरी खल्ु यो सोच्दैछु। नौलो भतवष्य बोके र पनु वावस पगु ेको तठटो कतहलै नउठ्ने गरी तकन सत्ु यो सोच्दैछु। ठूलो िहरमा दोभार्े गरर तदने छोरो नउठ्दा बद्ध ृ बा आमाको मन कतत दख्ु यो सोच्दैछु।
गजल बगै ँचाले लटरम्म मीठो पररकार तदन्छ जसरी पथ्ृ वीले नदीलाई तकनार तदन्छ। तलएर मात्र हदुँ नै तदन पतन जान्नपु छव जसरी चन्रमाले उज्यालो उपहार तदन्छ। खोल नयन चलाउ ती पौरखी हातहरू जसरी पतसनाले गररबको ईमान्दार तदन्छ। हतार गरे र हुन्न धैयवताको तसमा बढाउ जसरी साँझले तबहानलाई इन्तजार तदन्छ।
गजल अतहसं ाको मागव रोजे ँ तहसं ा तसकायो समयले कलम समाउने हातमा बारुद िमायो समयले। दायाँ बायाँ सतु ेर एउटै स्तन चस्ु दै हतु कव एर पतन कसैलाई राम कसैलाई रावण बनायो समयले। गभव तभत्रै तनदोर् तििल ु ाई द्वन्द्वको पाठ घोकाउँदै तवनािकारी अस्त्र बाँडेर कफ्यवु लगायो समयले। फुल चढाउँनक ु ो सट्टा रतिम धारा बसावउँदै ईश्वरलाई पतन तजतेर छुट्टै राज चलायो समयले। सपना बोके र तवदेि तहँडेका जवानहरूलाई चन्रमा देखाउँदै बादलसँग फँ सायो समयले।
गजल आहा सौन्दयव राग रातगनी फुलको के कुरा जानेरै गछव न् मन्िन होसमै भल ू को के कुरा। नपगु ेको ठाउँ कहाँ छ तहमाल होस या तराई ररष्टपष्टु पहाडको बीचमा पल ु को के कुरा। समावई रहेको हावाले यौवनको यद्ध ु मैदानमा मन्द वासना झरे को बेला झल ू को के कुरा। झरझर झरी अतन तहमपात बसेको बेला यौवनको तापले अगं तभजेपतछ मल ू को के कुरा। ओठहरू जोडाउँदै स्वास प्रश्वासमा हल्ला मच्चाउँदै जब दईु धड्कन तमलेपतछ कुलको के कुरा।
गजल बदतलँदो पररवेि बदतलँदो पतहरन ितपदं छै यहाँ तवश्वास गरौ ँ या नगरौं आफ्नै घांटी कतसदैछ यहाँ। बा भन्छन् सस्ं कृतत बचाऊ छोरो जतं गन्न्छ यू ब्लतडफूल भन्दै सायद तवसंगततको ध्वतनले समाज भदत् कदैछ यहाँ। जब हाई हेल्लोको A to Z भार्ामा सम्झौता हुन िालेपतछ लाघछ अब क ख अ आ माति सड्यन्त्र रतचदं छै यहाँ। आतखर बचाउँनु छ जसै एउटा अतस्तत्व पतहचानको याद रहोि जानी जानी इततहास छतलदं छै यहाँ। जन्मदाको आवाज भल्ु नु हदुँ नै घाटमा यतह चातहन्छ त्यसैले सोचौं पतहचानको डुंगा कताततर लतगदं छै यहाँ।
गजल आमा ततमी जन्म जननी,धती फुलाउँने ततमी सन्तानका द:ु ख तपडा सहेर,तिर उठाउँने ततमी। तभर पाखा कान्ला'हरुमा,तपठ्यँमू ा बोकी तहँड्दै डोको घाँस भारी बोके र,रनबन घमु ाउँने ततमी। कतहले गदै गाली कतहले,तझके र कोक्रा बाट ताते ताते गराउँदै आँगनमा,धनु सनु ाउँने ततमी। साँझ पख बसेर चल ु ामा,ईश्वरलाई मनाई कन मीठो नमीठो पस्की िालमा,जाउँलो खवु ाउँने ततमी। अती उपदेि तदएर सबलाई,संसारै त्यागी तदयौ ए आमा श्रमदानजी छ,ससं ार रुझाउँने ततमी।
गजल ततता मीठा अतीत भल्ु दै बाँच्ने अब काम भयो सन्ु दर संसार तनमावण गदै अतघ बढ्दा जाम भयो। सत्य बोल्दा झटू ो सातबत गनव खोज्लान् कसैले तदएकै तिएँ चोखो माया तर उल्टै बदनाम भयो। जतत मैले ततम्लाई रोजे ँ ततम्ले अकै रोज्दो रै छौ यस्तै गलत रोजाईले तजन्दगी बन्द खाम भयो। सगं ै तहँड्न खोज्दा मैले ततम्ले नै बाटो मोडेपतछ परे लीले भन्छन् हेर बेइमानकै अमल्ू य दाम भयो। दबु वल तिए अगं हरु मन सधै ँ सफा कंचन तियो दबु वलतालाई रावण मान्दै बलवान् ततम्रो राम भयो।
गजल गोली बारूदको भीडबाट घाइते जवान बोल्दै छ अब ढलेका सपतू उठ्नेछन् स्वतभमान बोल्दै छ। तसमाना सादै सम्मान कमाउँछ सरकार होतसयार बालवु ामा भतवष्य खोज्दै एक अन्जान बोल्दै छ। ट्याब्लेट नपाएर डोटीमा त्यो तनदोर् तििु ततु हँदा काठमाडौंमा नौमती बाजा बज्छ जलपान बोल्दै छ देिले यवु ाको रगत बेचरे समु ो पजेरो तभत्र्याउँदा तबदेिले घर घरमा लाि पठाउँछ इन्सान बोल्दै छ। गररबको घरमा चल ु ो बल्दैन दाउरा भएर के गने घाममा पटुकी कसेर गरे को त्यो मतदान बोल्दै छ।
गजल सायद मैले ततम्रो मन दख ु ाँएकी कुनै तदन दख ु तपडा सतु म्प ततम्लाई रुवाँएकी कुनै तदन। ततमी बस्ने हररयाली स्वयम्भक ू ो िहरतभत्र आई जबरजस्ती रातमा सतु ाँएकी कुनै तदन। इच्छाहरु िपु ारे र प्यासी बनी छटपटीदैँ ततम्रो िररर नघन पारी झल ु ाँएकी कुनै तदन। आत्मा बचाउ नारा लाउँदा जबजवस्ती हात समाई ततम्रो घाँटी रे ट्न जन्ती जटु ाँएकी कुनै तदन। एउटा प्रश्न ततमीलाई अतन्तम पल्ट राख्दै छु म के ततम्रो घर गहृ स्िी सक ु ाँएकी कुनै तदन।
गजल सागरको मोती बनी मेरो मन हछुव भन्थ्यौ तजवन भरका खसु ी सबै सतु म्पएर मछुव भन्थ्यौ। तजन्दगीका हरे क दख्ु ख तपडाहरु तमलाएर खसु ीका ती घनु हरुले सबै तडलेट गछुव भन्थ्यौ। आँिु बघदा गहभरी सागरसरी उलीएर सगं सगं ै हात समाई एकै साि तछुव भन्थ्यौ । कै ले काँही मेरो महु ार एकै पल नदेख्दामा मलाई भेट्न अँधेरीमा जनु बनी झछुव भन्थ्यौ। कै ले बसी दोबाटोमा मेरै बाटो छे की छे की मेरै लागी घर छोडी चाँडै बसाँई सछुव भन्थ्यौ।
गजल गदैछौ गाली तकन तनर'् दोर् बेल्डांगीलाई दमक चम्कायो कसले सोध्नू होस बेल्डांगीलाई। तब्रगेड बाल्नेको के दोस बेच्नेको चचाव गर अततवादको नारा लाउँदै के को रोस बेल्डांगीलाई। प्रदर्ू ण मात्रै हैन सडकका भट्टी सक्ु छन् जब तसतबर उठ्छ देखाउँनु जोस बेल्डांगीलाई। बटुवा सारा हेर करोडका मातलक भए सम्पतत सोदै हाँसेउ तकन ठोस बेल्डांगीलाई। बेल्डांगी सहर भन्नु दमकको मटु ु नै माँने हन्ु छ गततछाडा चै ँ कसैले नभ'नोस बेल्डांगीलाई।
गजल भारत पारी तचन वारी,द ि उतै रयो भन्दै नरोउ हके दौरा सरुु वाल चौबन्दी जल्यो भन्दै। पपलु र बरको फे दमा घर तियो िाहाछ मलाई भो अब उदास नहोउ संझनाले डस्यो भन्दै। तहजोको त्यो कालो रात सम्झी मन नजलाउ सारा स्वप्ना देि हाँक्ने पतहरोझै ँ भत्क्यो भन्दै। मने मयो देिको लागी रतिम खोला बगाएर फुल चढाउ सतम्झएर नसोच नाता मयो भन्दै। जहाँ जान्छौ ँ जहाँ बस्छौ ँ उही त हो हाम्रो देि देितबहीन छै नौ हामी नरोउ तबरानो भयो भन्दै।
गजल मैले त्यागेको माटो छुटेर रुँदै छरे मैले तहँडेको बाटो सतु ेर रुँदै छरे । नागबेली धान झल्ु ने चारकुने खेतका गरा हली र गोरु तबना झक ु े र रुँदै छरे । कसरी जाउँ फकी जन्मेको प्यारो गाउँ फाटेको छानो एक्लै चहु रे रुँदै छरे । ससु ेली मादै नदी घरै को छे उ बघने गाउँ घरै सन्ु ने हदुँ ा भल ु ेर रुँदै छरे । व्यस्त यो ठूलो िहरमा मदु ावझैं पतल्टरहँदा गाउँ बस्ती मलाई सम्झी कुरे र रुँदै छरे ।
गजल फके र जाउँ कसोरी पल ु ै तोतडए'पछी वारी र पारी रहेर मनै मोतडए'पछी। मेरो अततत उतै छ जलेको प्यारो गाउँमा ढल्दैछु वारी तकनारमा बाँधै फोतडए'पछी। यादका टुक्रा मात्रै झतल्कएर सामु आँउछ तबरानो एकान्त िहरमा रहर गोतडए'पछी। सम्हाल्नै गारो यहाँ तपडाले भररएको छाती मेरो आधा स्पन्दन पाखाततरै छोतडएपछी। तजउँदै मदु ाव भएँछु िोरै सास रहेर के भो साईनो सम्बन्ध सारा गाउँततरै जोतडएपछी।
गजल आिाहरु आँफै कुल्ची बसाँई सनवु परे पछी प्यारो गाउँ बस्ती छोडी सागर तनवु परे पछी। दाउरा बोक्ने डोकोभरी तपडाहरु छोप्नु पयो पोकाहरु नतमलाउँदै झोली भनवु परे पछी। पल्ला घरे साईला दाजै (स्वाँक्क)२ गदै तिए भेलसरी आँिु झारी तबदाई गनवु परे पछी। पाईलै तपछे चट्टानहरु कुल्ची कुल्ची तहँतडरयौ ँ बेमौसमी पातसरी ओईली झनवु परे पछी। आफ्नै घरको घरु ी जल्दा टुलटु ु लु हेनवु पयो िोरै सास रहे पतन तजउँदै मनवु परे पछी
गजल कयौ ँ तददी बहीनीहरु रुँदा होलान पखीएर दाजु भाईको ततस्बर हेदै एकान्तमा तड्पीएर। नझानवु आँिु चेली तटकाको सातहत हेदै मखमली र सयपत्रीका माला उन्दै झस्कीएर। टाडा नतजक जे भएनी तबन्ती मेरा चेलीहरु मझु ीएर नसतु ावउ है खाली तनधार सम्झीएर। धमव कमव संगालेर जनु झै ँ खतु ल हाँसीरहु तबरहले मनको सघं ार नभत्काउँनु उलीएर। बाचाहरु नतोड्नु है यगु ौ यगु को मेरा चेली मनाउँला अको ततहार खसु ीले मन पसीएर।
गजल आडम्बरको घम्ु टो ओढेर कसरी गजलकार भयौ ततमी अिवतहन अक्षरहरू जोडेर कसरी गजलकार भयौ ततमी। पतहचान बचाँउन ततमी त ग्रन्िहरू सजाउँथ्यौ सधै ँ गीता रामायण छोडेर कसरी गजलकार भयौ ततमी। सन्तानहरूलाई बडा दिैको खै आिीवावद पतन तदएनौ रीतत तितत तोडेर कसरी गजलकार भयौ ततमी। दौरा सरुु वाल चौबन्दी तललामी गदै बजारमा आफ्नै इततहास फोडेर कसरी गजलकार भयौ ततमी। लोभ लालचमा घमव कमव संस्कृतत साट्दै बजारमा स्वातभमानी बाटो मोडेर कसरी गजलकार भयौ ततमी।
गजल यसपालीको ततजमा हेर मैले पतन गीत गाएँ छम्म छम्म नाच्ने संग अजम्बरी तमत लाएँ। सोच्या जस्तै भन्या जस्तै रातो साडीमा सतजएकी ततलहरी चरु ा पोते लाउने संग प्रीत लाएँ। मादलु र सारंगीले दोहोरीमा रंग रोगन भदै तीजको भाकासँगै उनको मटु ु माँझ तजत छाएँ। चेली माईतत एउटै घरमा खीर दर पकाएर सगं ै बसी चाम्रे खाजा उनै तसत खाएँ। छड्के ततलहरीमा सतज'एर नाँच्ने आँगनीमा सासू बहु ारीलाई गाँस्ने कस्तो राम्रो रीत पाएँ।
गजल जीवनलाई कालले तबना बाजै तलएर गयो सनु सान कोठामा रगत ताजै तपएर गयो। नदी तडलैको पक्की सडक तवभागको भवनमा बाँच्ने रहर भएनी पत्िरझैं तखएर गयो। जीवनको भाघय रहेछ कमजोर भतक्या सडक झै ँ हरे क रात मत्ृ यसु ँग हाँस्दै तजएर गयो। जीणव त्यो कोठातभत्र छटपतटरयो जीवन रोएर हरे क साँझ बाँच्नलाई मतदरा तपएर गयो। आत्मालाई िातन्त तमलोि कामना गरौ ँ सबैले आज यो कणावली पल ु ैमा सम्झना तदएर गयो।
गजल जीवन र म अनौठो खेल खेल्दै तियौ कतहले खसु ी त कतहले तपडा झेल्दै तियौ। सगं ै तहँड्यौ डाँडा पाखा अतन िहर बजारमा मत्ृ यु आउने बाटो पतन हामी छे ल्दै तियौ ँ। पतछ पतछ आउँदै तियो त्यो काल एतै भाघन नसके र गरुङ्गा ती भारी ठे ल्दै तियौ ँ। अचानक आए तसपाहीहरू तेतसवतदए ढोका अगाडी तब सम्म त घाँटीमा सास बेल्दै तियौ ँ। तनष्ठुरी दैव नजाती आयो टप्प तटप्यो जीवनलाई आतखर अततम साि सम्म तजन्दतग जेल्दै तियौ ँ।
गजल मतन्दरमा जोर परे वा उडाएको भल्ु यौ होला देउरालीमा माया साट्दै कराएको भल्ु यौ होला। ततमी नै हौ उठी पोत्ने आँगनी त्यो तमरतमरे मा सात फे रा घम्ु दै पतण्डत पढाएको भल्ु यौ होला। सोतच हेर तचसो पानी तसरमा राखी माई नदीमा सगं ै बसी तसवतलगं बनाएको भल्ु यौ होला। ततम्रै मनको राजगद्दी आरोहण गनव मैले तसन्दरू पोते हातमा चरु ा िमाएको भल्ु यौ होला। तर आज बेइमानीको जाल बन्ु दै बसाई सरे उ लक ु ी लक ु ी ओठमा ओठ चलाएको भल्ु यौ होला।
गजल फे री आज चस्कयो छाती तबहानीको प्रहरसँगै बाध्यताको झोली बोकी तहँड्नु पयो रहरसँगै। ततमी लाघयौ पवू वततर खसु ी जतत पोको पारी एकान्त यो मलाई छोडी मतु झवएको ठहरसँगै। तबर् जतत मलाई तदई आँफु अमतृ तपउँदै तहड्यौ दोबाटोको पत्िर सरी बाँचक े ै छु जहरसंगै। ततम्रो मेरो सम्बन्धको चचाव जतत चले पतन उठ्न यहाँ नसके र लडेको छु नहरसँगै। ततमी तबना सतक्दन म बाँच्न भन्न लाज लाघयो त्यसैले त बाँची राछु बेइमानीको लहरसँगै।
गजल तभत्र कोठामा उनको आत्मा छटपतटँदै तियो बातहर पखावइमा तसतझै ँ आँिु लटपतटँदै तियो। अबेर भयो उनको आगमनमा सक ं ा लाघदै गयो आतरु सबको मन भेट्नलाई खटपतटँदै तियो। बाँध टुट्ला जस्तै भयो सन्देि आएन के ही अँगालोमा बेनव आमालाई हातहरू झटपतटँदै तियो। तवडम्बनाको संख फुतकयो तभत्रै कोठाबाट जोडले ओफ! बह खोल्न यहाँ ओठहरू फटफतटँदै तियो! दैवको रीत नजाती हनवनु ै पने यहाँ सबैलाई आफन्त जन'हरुको ददव सडकमा भटभतटँदै तियो।
गजल जीवनलाई कालले हदाव म टुलटु ु लु हेरररहेिे ँ अतन लािमा जल छदाव म टुलटु ु लु हेरररहेिे ँ। अनकन्टार त्यो कालो कोठामा सख ं फुके र मलामीहरू ती अतघ सदाव म टुलटु ु लु हेरररहेिे ँ। जीवनको र मेरो सम्बन्ध तससा सरी टुटाएर कालले अपहरण गदाव म टुलटु ु लु हेरररहेिे ँ। सझं नाको सौगातहरू छोडेर बैतणी तनवलाई जीवन तचता माति पदाव म टुलटु ु लु हेरररहेिे ँ। जीवन र म अतन मत्ृ यक ु ो यो यद्दु मैदानमा िरीर मट्टी भएर झदाव म टुलटु ु लु हेरररहेिे ँ ।
गजल मैले रोजेको डायरी नयनले गोडी तदनु है पढेर मनका कुरा डायरीमै छोडी तदनु है। तक्षततज पारी गाउँमा कलम यो मेरो प्यारो रोएको सन्ु यौ भने मसीले जोडी तदनु है। मैले रोजेको बाटो कलमले कोने गछुव सपनीमा तनदाएँ भने तनन्रालाई फोडी तदनु है। कलमले कोने गछव मेरा ती तपडा र व्यिा मनको बह लक ु ाउँन कसैले न'तोडी तदनु है। तक्षततज पारीबाट नाता जोड्न खोज्दै छु साईनोको न्यानो फररया सबले ओढी तदनु है।
गजल जताततै भेटे ँ मैले तदल टुटाइ बाँच्नेहरु सडक बीचको किा सरी भाघय फुटाइ बाँच्नेहरु। यौवनको व्यापारमा हाँस्नेहरु पतन भेटे ँ पापी बेइमान नजरै ले प्रेमी कुटाइ बाँच्नेहरु। दोबाटोमै भेटे ँ कतत तपडा सरी रुँनेहरु हरे क बन्धन धागो सरी च्वाट्ट चटु ाइ बाँच्नेहरु। छुवाछूतको नारा लाउँदै नाँच्नेहरु पतन भेटे ँ जातको खेती गदै यहाँ समाज जटु ाइ बाँच्नेहरु। कतत देखे ँ बाध्यताको झोली बोकी तहँड्नेहरु प्यासी बजारै मा आँफनै अतस्तत्व लटु ाइ बाँच्नेहरु।
गजल आज तजउँदै मेरो मटु ु को बीभत्स हत्या गररयो अतन हत्के लोले तनचोरे र कालो जहर भररयो। वा! मेरो सरीरलाई मतन्दरमा बलीझैं चढाएर स्वािव सरीका कोमल हातले ननु चक ु छररयो। जीवन सारा सतु म्पएर सधै ँ कन्चन पतवत्र बनेर चोखो प्रेम पत्र लेख्नाले तड्पी तड्पी मररयो। सन्ु दर संसार भत्के पतछ घणृ ाको पतहरोले हरे क इच्छा जलाउँदै बगरमा बसाई सररयो। रंगहीन तसउँदो सजाएर तजउँदा मलामीसँगै अतन्तम उत्सव मनाउँदै आयव'घाटमा झररयो।
गजल तबहानै चाँदनी लक्ु ने डरले रात रोइ रहेछ तबहानै सयु वले चम्ु ने डरले रात रोइ रहेछ। सन्ु दर िान्त गगनका सनु ौला चतम्क रहने तबहानै ताराहरू सत्ु ने डरले रात रोइ रहेछ। सयु वको उदयमा'नले भीर्ण ताप संगै तबहानै तहमताल फुट्ने डरले रात रोइ रहेछ। तववि भएर तमरतमरे मै आत्मा सम्मरपण गदै तबहानै धतीलाई भल्ु ने डरले रात रोइ रहेछ। तबदाइको सख ं संगै तनराि तचसो तसतको तबहानै आँिल ु े पज्ु ने डरले रात रोइ रहेछ।
गजल औँसीको प्रहर सरी रात'सहेर रोएँ। चतकव एको तससा सरी घात'सहेर रोएँ। छाती कुल्चँदै ततमीले तहँड्दा दख ु ेर भतत्कएको सडक सरी लात'सहेर रोएँ। चोखो मायामा खोट देखाउँदा िक ु ेर बतल्झएको चोट सरी मात'सहेर रोएँ। तपडामा ततम्ले पवव मनाउँदा जटु ेर कँु तजएको समाज सरी जात'सहेर रोएँ। साईनो संबन्ध ततम्ले चटु ाउँदा लटु ेर ओइतलएको पात सरी बात'सहेर रोएँ।
गजल मेरो मटु ु तनचोरे र अकै मटु ु छुन्छौ तकन अकै ततर सतल्कएर मेरो प्रेम धन्ु छौ तकन। बरको छाँया छोडी सयौ पीपलक ु ो छायाँततर प्यास मेट्दै दतु नयाँमा बेई'मानी हुन्छौ तकन। उकाली र ओरालीमा संगै तहँड्छु भन्ने ततमी मौका छोपी चौबाटोमा फे री जाल बन्ु छौ तकन। एक्लै बाँच्न गारो हदुँ ा मेरै धर खोज्दै आयौ तर आज मलाई देख्दा मल ू ढोका िन्ु छौ तकन। एकै पल नदेख्दामा मछुव भनी बेहोस हन्ु थ्यौ तर मेरो माया गोडी अकै लाई चन्ु छौ तकन।
गजल ततमीले डोली सजाउँदा नौमती बाजाको तालमा म त सोली चढ्दै तिएँ एकोहोरो संखको चालमा। एउटै तदन र समय तबदाइको हाम्रो लगन अनौठो ततमी हाँस्दै तियौ म पतल्टरहँदा घाटको छालमा। सहु ागरातमा ततमी यौवनको सवु ास पस्कँ दै गदाव रम्दै तिएँ म टप्प तटपेर लैजाने कालको जालमा। कस्तो अचम्मको डोली तजउँदो र मदु ाव सजाउँने ततम्रो तसर रंतगँदा पतु जँदै तिएँ म मत्ृ यक ु ो पालमा। ततमीलाई दधू र दहीले पतसवदाँ छाता ओढाएर म त हसोलास मनाउँदै तिएँ अतघन कुण्डको आलमा।
गजल फे री आज एउटा तदल टुटाएर आएँ आँफनै भाघय तससा सरी फुटाएर आएँ। टुट्नु फुट्नु तजन्दगीको परु ानै रीतत रै छ बढ्दै गाको गतहरो माया छुटाएर आएँ। यात्रा हाम्रो बढ्दै तियो तसखर चमु े सरी तर बीचमै धागो सरी चटु ाएर आएँ। सराबसँगै खराबीका बानी बढ्दो रै छ त्यसैले त आँफनै प्रेमी कुटाएर आएँ। समाजको अतग एउटा आस्िा ढलेपतछ मतन्दर तभत्र आफै लाई लटु ाएर आएँ।
गजल ब्यिै रहेछ तप्रयजन यादमा डुबेर हराउनु हरे क साँझ सपनीमा झतस्क'एर कराउन।ु िाहा'छ माया अन्जानैमा बस्छ भन्ने कुरा तर स्वािव लटु्न कसै'लाई मन न'पराउन।ु कसले सक्छ जोख्न माया तराजमु ा पतस्कएर तबना अिव ततस्वरहरू तदलमा तकन भराउन।ु अप्नाउँनु भन्दा पैले आँफु सफा हुनै पछव आतरु गरी हुन्न यहाँ आफ्नै मनलाई अराउन।ु आतखर प्रेममा पतवत्रता बँचाई राख्या भए अनायासै आतत्तएर तकन यहाँ डराउन।ु
गजल नदेखाऊ िान ततमी फुलझैं भईू मा झनवु पलाव भईू मा धल ू ो'सरी हदुँ ै मेरै पाउमा पनवु पलाव। होस गर है समयमै पितापले रुनु तकन खाली तसउँदो'माझ मेरै हातले तसन्दरू भनवु पलाव। जतत खोज्छौ मान िान त्यतत नतजतकँ दै छु म पन्चे बाजा'सगं ै जन्ती तलई आउँदा डनवपु लाव। जब ततम्रो आँगनीमा सात फे रा मैले घम्ु दा मेरै काखमा बस्दै लाजले ततकव एर सनवु पलाव। त्यसैले त नदेखाऊ घमन्ड त्यो मेरो सामु आतखर प्यासका रँ गहरू मेरै ओठमा छनवु पलाव
गजल ए चम्ु बनहरू हो सताउन नआउ यहाँ ए धड्कनहरू हो सताउन नआउ यहाँ। नाररएका गोरु जस्तै एक अकावमा बाँतधएर ए तड्पनहरु हो सताउन नआउ यहाँ । भँगेरा र भँगेरी झै ँ च्यारव च्यारव गदै रातमा ए उल्झनहरू हो सताउन नआउ यहाँ। चौबाटोमा यौवन पोख्दै फुलको रस खसे सरी ए मचं नहरु हो सताउन नआउ यहाँ। पजु ारीको लगन तबनै सहु ागरात मनाउने ए गन्िनहरू हो सताउन नआउ यहाँ ।
गजल कलकल बघने धाराबाट पानी आउँन छाडेपतछ पधे ँरीमा गाग्री बोकी साईली धाउँन छाडेपतछ। हनु ै छाड्यो आज भोतल भेट घाट साईली सगं चौतारीको चौबाटोमा रोदी गाउँन छाडेपतछ। मेलापात धाउँनु कतत देख्या छै न छाँया पतन नाग'बेली फररयाँमा चोली लाउँन छाडेपतछ। हाटबजार गोधतू ल त्यो साँझ पख कुरी बस्छु छै न माया आज भोतल िहर छाउँन छाडेपतछ। तलंगेतपंग खेल्न पतन आउँनै छोडी मोरी काली तपल्स सेवन गदै धोले छोरो पाउँन छाडेपतछ।
गजल ग्रस्त यो िरीरका ज्वारभाटाहरू तखई रहेछन् हरे क अगं अगं हरु उपचार तबतहन तजई रहेछन।् मनको कोखमा सन्नाटा छाएपतछ तपडाले मत्ृ यक ु ा तसपाहीले खल्ु ला जाँच तलई रहेछन।् लाघछ तजन्दगीनै तसतद्दयो ऐठनै ऐठनमा फे री तजउँदा मलामीहरूले पहरा तदई रहेछन।् समातप्तको यो घडीमा छै नन् आफन्तहरू भोतललाई पखवदैँ नयनले आँिु तपई रहेछन।् यती भव्य धतीमा एतक्लएर बाँच्नु पदाव सान्त्वना तदँदै नसाले मांश्पेसी तसई रहेछन।्
गजल आफ्नै प्रेमी छाडी आँखा अन्तैततर लाँउने ततमी आँगनीकै पानी धारा छोडी अन्तै धाउँने ततमी। ततम्रो नाली बेली ईतत'हास सबैलाई िाछ यहाँ जो चोर उसकै ठूलो स्वर गदै गीत गाउँने ततमी। मेरो जीवन काँडा सम्झी भवु ासरी जीवन खोज्दै न्याउलीको त्यो भाका छोडी तडस्कततर छाउँने ततमी। मेरो बस्ती सक ु ु मबासी भतत्कएको धर सम्झी एता मटु ु टुटाएर अन्तै माया पाउँने ततमी। हरे क सािी भन्छन् यहाँ सफलताको तसखर छोएँ तर मेरो सफलतामा आगो सल'् काउँने ततमी।
गजल कसको लागी बाँचौं यहाँ मत मरे ँ मरे ँ अब तेरो मेरो भन्नु छै न मत झरे ँ झरे ँ अब। धेरै भयो पतखवएको ततम्रो लागी चौतारीमा आँिु सरी तलाउमा मत परे ँ परे ँ अब। पखावईमै तबत्यो जीवन साँझको घाम सरी माया भन्नु झटू ो रै छ मत डरे ँ डरे ँ अब। जब मटु ु साट्दाखेरर तससा झै ँ फुट्छ भने आजै ततम्रो गाउँ बाटै मत सरे ँ सरे ँ अब। बैगनु ीलाई गनु तदँदा प्रततघात हुन्छ भने टुट्दै फुट्दै सेती नदी मत तरे ँ तरे ँ अब।
गजल छोडी जाने तनष्ठुरीको बात बेघलै हुन्छ हजरु गोडी जाने तनष्ठुरीको मात बेघलै हुन्छ हजरु । एता तठक्क पारी उता अकै सगं झटू ो साईनो जोडी जाने तनष्ठुरीको घात बेघलै हुन्छ हजरु । बेइमानीको जाल बन्ु दै साँचो माया काँच सरी तोडी जाने तनष्ठुरीको हात बेघलै हुन्छ हजरु । प्रेमी चटु ाई अकै संग लतठ्ठएर बाटो यहाँ मोडी जाने तनष्ठुरीको रात बेघलै हुन्छ हजरु । घर छोडी बन चदै पतत पत्नीतबचको नाता फोडी जाने तनष्ठुरीको जात बेघलै हुन्छ हजरु ।
गजल जतत सक्छौ देउ जहर अमतृ सम्झी तलउँला सधै ँ जतत सक्छौ जलाउ मन अतघन राप तपउँला सधै ँ। छोडीगए पतन हन्ु छ एक्लै बाटो बीचमा मलाई जतत सक्छौ मोड साईनो बाटो खोली तदउँला सधै ँ। खसु ी सारा बटुलेर आँिु जतत मलाई तदँदै जतत सक्छौ रे ट छाती एक्लै मटु ु तसउँला सधै ँ। आँखाका ती नानीबाट तझकी फाले पतन हुन्छ जतत सक्छौ फातलदेउ फलामसरी तखउँला सधै ँ। मायारुपी जाल तफँ जाई जालहरू हानी रहु जतत सक्छौ िाप जाल तपंजडामै तजउँला सधै ँ।
गजल ततमीलाई रातो साडी चोली तलएर तकन आउँनु झरे को फुल तटप्न फे री डोली तलएर तकन आउँन।ु चरु ा पोते गन्ु यू चोली कतत चोतट माघछौ हेर ततम्रै नामको घात बोक्न झोली तलएर तकन आउँन।ु ततमी जस्ती अवसरवादी यो धतीमा कमै होलान् फे री ततमी सगं खेल्न होली तलएर तकन आउँन।ु कतत तछौ आँखा मलाई भो अब पदैन तनवु फकाउँन तमठ्ठा पानको सोली तलएर तकन आउँन।ु जन्ती तलएर आउला भनी बाटो नकुरे हुन्छ हजरु ततम्रो लागी हर पल बघने खोली तलएर तकन आउँन।ु
गजल ततम्रो माया तराजमु ा नापेर पो खस्कीएँछु साँझ पख भट्टी पसी मातेर पो खस्कीएँछु। तबहे गनव बाँसका तसन्का काढेर नै तदन रात भोलावकै पातका दनु ा गाँसरे पो खस्कीएँछु। सपनीमा ततम्रो तसउँदो तसन्दरू ले रँ गाएर पन्चे बाजा मारुनीमा नाचेर पो खस्कीएँछु। तबहे पतछ धोले छोरो पाउँ भन्दै फुल तटपी कालो बोको मतन्दरमा भाके र पो खस्कीएँछु। साईको धडी तकन्न भनी तकनी ल्याई लैनु भैंसी ठे कीभरर गोठमा मोही पारे र पो खस्कीएँछु।
गजल नीलो आकाि चम्ु दै हेर बाज उड्यो सररर आनन्दले स्वगव डुल्दै तसतल हावासंगै हररर। यस्तै गरी उड्न पाए कस्तो हन्ु थ्यो सोतचहेर गगन सारा फन्को मादै स्वतन्त्र भै फररर। धती चम्ु दै यात्रा गनव पाए कस्तो हुन्थ्यो सोच तपडा भल ु ाई खसु ीका ती आँिु झादै बररर। सबले एकतछन मनन गरौ ँ यस्तै गरी उडी उडी ईन्रेणी त्यो रंगसरी ब्रह्माण्ड घम्ु दै भररर। माया प्रीती पतन यस्तै गरी झल ु ोस् िान्तसँग यो पो हो तजन्दगी सधै ँ नै हाँसो खसु ी झररर।
गजल फुल्छ फुल ढकमक्क भमराकै काल त होनी घाम छाँया झै ँ जीवन यो माया जाल त होनी। िाँती रहेका अनौठा अपरु ा रहरका डुंगाहरु छताछुल्ल पारी डुबाउँने अश्रु ताल त होनी। यहाँ अतभनय गरे र सवु ास छदै मध्यरातमा तसफव पदाव पछातडकै बेइमानी चाल त होनी। हाँसो आँिु र रोदनको खेल मैदानमा जीवन घणृ ाका फुलहरूले सतजएको िाल त होनी। धतीमा आमाकै न्यानो काखमा पतल्टए पतन आतखर जीवन कालकै मीठो माल त होनी।
गजल बालवु ामा झटू को खेती गनव सतकन मैले। बेइमानी जाली बजारमा चनव सतकन मैले। िहरको पानीसरी महगं ी त्यो दक ु ानमा तष्ृ णाको यौवन बासना छनव सतकन मैले। दतु नयाँको ततखाव मेट्दै चम्ु बनहरू बसावएर मस्त प्यासी छाँगाबाट झनव सतकन मैले। अरूको खाटो लाघया घाउमा चक ु भरे र घातको धतमलो सागर तनव सतकन मैले। तपडा सम्ु पेर अरूलाई खसु ी सारा सोरे र छाती कुल्चेर बसाँई सनव सतकन मैले।
गजल माया भन्नु यस्तै रै छ खाटो बनी रही तदने मन मटु ु मतस्तष्कमा टाटो बनी रही तदने। साट्दा माया तौतलएर सनु सरी बजारै मा चोट बनी तपडा'हरु पाटो बनी रही तदने। समन्ु रकै लहर बनी उली जाने भेल सरी कतहले एता कतहले उता फाटो बनी रही तदने। प्रेम घणृ ा डाह ईष्याव झटू को खेती सबै रै छ मौका परे छातीमा तीखो भाटो बनी रही तदने। हाँसो खसु ी रोदन आँिु यस्तै रै छ माया भन्नु जब धड्कन चल्न छोड्दा माटो बनी रही तदने।
गजल मेरो घर,िर लटु्यो फे री बस्ने िहर लटु्यो (हाँसी)२ बाँच्न खोज्दा फे री सन्ु दर प्रहर लटु्यो जीवन भोगाई यस्तै रै छ भन्दै धड्कन िामी रहे ँ तर ततखाव मेट्न राख्या फे री तपउँने जहर लटु्यो यस्तो लाघछ दैवले पतन (छानी)२ हे ँला गछव न् त्यसैले त तजन्दगी तसँच्ने फे री मेरो नहर लटु्यो। फुल तदँदा काँडा संझी पतछबाट छुरी हानी सगं ै बाँच्न तसकाउँने फे री प्रेमको बहर लटु्यो। तवश्वास'घातको करौ ँतीले रे ट्न सम्म रे टेपतछ समाज सामु बौररएर फे री उठ्ने ठहर लटु्यो।
गजल यादका कुलाहरू परु ै बन्दै गरी तदउँ काँडा उखेली त्यहाँ नौनी घसी तदउँ। जनु को पतन दाग हटाएर सदा सदा फुलको धारमा मखमल जडी तदउँ। धोका भन्ने िब्द खारे ज गरे र साँच्चै िब्दकोिमा प्रेमील अक्षर बनी तदउँ। जब जब तपडा बडेर दख्ु छनी छाती हरे क हृदयमा खसु ी बनेर फली तदउँ। तर कहाँ हुन्छ र सोचे झै ँ जीवनमा लाघछ तनमोहीबाट टाडै रही तदउँ।
गजल मैले रोजेको लाली कतै झरर सके छ मैले रोजेको माली अन्तै सरर सके छ। अब त के ही रहेनन् ती सम्बन्धहरू पखावईमै पो जीवन बरै मरर सके छ। रोएँ िे ँ कतत कतत जनु ेली रात हेरेर जनु पतन कसैले हरर सके छ। कतै आउला माया भनेर कुरी रहे ँ ओफ कुदाव कुदै साँझ परर सके छ। फतकव आएन उनको त छाँया पतन िाहा पाएँ मायाले समन्ु र तरी सके छ।
गजल तजउँदै मेरो िरीरमा कफन सजायौ तठकै छ यगु ौ ँको संबन्ध तोडी दतु नयाँ हँसायौ तठकै छ। मलम पट्टी लगाई रहे ँ प्रेम बचाँउन तपडा सहदै तर हासी हासी मलाई जलायौ तठकै छ। सायद म नालायक भएरै ततम्रो लातग बगरको पत्िरझैं बेहाल बनायौ तठकै छ। मैले संघर्व ततमीले तसमलको भवु ा संझरे ई हातमा झटू ा यादहरु िमायौ तठकै छ। कतहलै देखेनौ मतलन अनहु ारका रे खाहरू हरे क रात आिमु ै जगायौ तठकै छ।
गजल तववाद गरे र हन्ु न अब लौ सोच्नपु छव सजृ नाका फुल कता छन् सबै खोज्नपु छव । आँफ्नो सातहत्य जोगाउँ हातेमालो गदै सबैले कलम समाउँनेहरु हो अब इततहास कोनवपु छव । सस्ं कृतत र परम्पराको मीठो धनु गन्ु जाउँदै पवू व पतिम उत्तर दतक्षणमा पल ु जोड्नपु छव । ससं ारभरर छररएर बसेका तप्रय भटू ानी हो तवश्व सामु पतहचान देखाउँन अब बोल्नपु छव । सस्ं कृतत परम्पराको रक्षा गरे र साँच्चै अब नव तपँडीलाई समु ागव देखाउँन यद्ध ु रोक्नपु छव ।
गजल आँिु झयो गाउँघरको सम्बन्धनै छुट्दा खेरी आँगनीमै सारा इज्जत बैरी आई लटु्दा खेरी। तबहानीको तमरतमरे मा झोली च्यापी तहँड्नु पयो दैव सामु आँफनै भाघय तससा सरी फुट्दा खेरी। आँखा छोपी रोतहरहें आफ्नै घरको धरु ी जल्दा नचाहँदा नचाहँदै गाउँको याद चटँु्दा खेरी। लैनु गाई कटेरोमा एक्लै गहु ार माघदै तियो चारै कुना घर घेरी राइफल तभने जटु्दा खेरी। खोल्सा खाल्सी खोलीहरू मलाई हेरी रुँदै तिए जन्मभतू म'सँगको नाता सदा सदा टुट्दा खेरी।
गजल बारी जोत्दा खस्ु के र फाली हलो ररसले कुद्योनी आली जवु ा हररस कुल्ला हाल्दै भाघदा हलीले खायोनी गाली। झाले माले घर पगु ी फटाफट खोल्दै नाम्लो डोरी हताररँ दै घाँस खादा आफ्नै गोबरको लाघयोनी लाली। कँ तचयाले धाक लायो धान काट्दै खरु पेटोसंग जतं गएर खपु ाव बागझै ँ रुख चढी भाँच्योनी डाली। नकचरो कदवको फुती देखी खक ु ु रीले सरुु गयो बन्द पाजी बन्द सत्रले कदव उफ्री पाफ्री हाँस्योनी खाली। खेत जोत्ने घाँस दाउरा गने सबलाई तदउँसै रुवाएर तजरे खसु ावनी रतमता हेदै नाँच्दै तपट्न िाल्योनी ताली।
गजल भगवानका चरणमा तपडाहरू राख्न सतकन भोतल मतन्दर गई चढाउँला भतन साँच्न सतकन। अतीत सधै ँ आलो घाउ बनी मेरै अगाडी पदाव ऐठन पाने सम्झना तोडेर जनु ी काट्न सतकन। कसरी त्यागौं ती पलहरू खसु ी लतु टएको साँझ मटु ु को यो जलन नयाँ मल ु क ु मा दाब्न सतकन। म अिवतहन भएरै होला तदनमै तनदाएको यसरी छातीमा ज्वाला तलएर म कतहलै हाँस्न सतकन। तबछोड भएसी फे री कै लै मेल नहुने रहेछ गाउँकै तपरले यो िहरमा आँिु िाम्न सतकन।
गजल नदेखेको भए हुन्थ्यो नजर जध्ु यो नझक्ु ने गरी नभेटेको भए हुन्थ्यो माया बस्यो नगम्ु ने गरी। पवू व छोडी पतिम पगु े ँ सायद भाघय यस्तै तियो घर फकी जाउँ भन्दा हात समाईन नबझ्ु ने गरी। तजन्दगीको पररभार्ा के हो कुतन्न बज्ु न नपाई कस्तो साईनो लाएँ मैले छाती दख्ु यो नभल्ु ने गरी। यस्तो लाघथ्यो संबन्ध यो अटल अमर हुन्छ भन्ने तर आज अनायासै दईु तकनार भो नजटु्ने गरी। के भयो कसो भयो खै कता कस्तो फरक पयो बल्ल िाह पाएँ मेरो जीवन फँ सेछ नउठ्ने गरी।
गजल सक्छस् भने मैले झै ँ बाँचरे देखा ए तजन्दगी काँडा माति पाइलाहरू राखेर देखा ए तजन्दगी। तेरो अतस्तत्व के ? जब म घाटमा सतजन्छु अरे तचता'लाई तै ँले ढाँटेर देखा ए तजन्दगी िोरै साससँग साईनो गाँसी बाँच्न नतदने तँ हो अब मत्ृ यल ु ाई तँ टारे र देखा ए तजन्दगी। प्राण रहे सम्म त रहन्छस् तँ याद गरे हुन्छ नत्र लािमा प्राण हालेर देखा ए तजन्दगी यदी आडम्बरी तदयो जलाउँने भए साँच्चै धतीको नीतत/तनयम नाँघरे देखा ए तजन्दगी।
गजल ज्यान त तदन सतक्दन म लैजाउ िहर उपहार तप्रये सरु ताल मीठो धनु को लैजाउ लहर उपहार तप्रये। एउटा भाको मटु ु माँघछौ मैले बाँच्ने आधार के हो स्वािी मटु ु तसचाई गनव लैजाउ नहर उपहार तप्रये। नमाँग भो मेरो आत्मा चोरी दाउमा जहर भदै बरु सन्ु दर तबहानीको लैजाउ प्रहर उपहार तप्रये।। बेहोिीमै बाँचल ँु ा म खनु तदन्छु िाप झोली अतन मेरा चाहनाका लैजाउ रहर उपहार तप्रये।। धेरै सहे ँ ततम्रो प्रहार तसर पाउ दख ु ाई जताततै अब गीत गजल फुने लैजाउ बहर उपहार तप्रये।।
गजल तँ नपसंु क तजन्दगी हैन भने सातबत गरे र त देखा मेरै अतस्तत्व लटु्छस् कतत एकै पल मरे र त देखा। कतहले रे ट्छस् तपडा तदएर त कतहले सासै रोके र म तजउँदो मनष्ु य िरीरमा लौ सतबीउ छरे र त देखा। मौका परे काललाई पतन िन्ु न सक्छ मान्छे ले हेर हेरौं तेरो आँट कस्तो इनारको पानी भरे र त देखा। पेटतभत्र पाप बोके र स्वगवको खेती नगनवू कतहलै नकै तमल्ने हो पापीहरूलाई स्वगवमा सरे र त देखा। अनौठो इततहास लेख्नु छ घतीसँग संझौता गरे र अब फे री यद्ध ु गनव मसँग बले ँसी तरे र त देख।
गजल प्रेम यद्ध ु मा फारम भररँ दनै तप्रये तबना लगन नजरु ाई हररँ दनै तप्रये। ततमी भन्छे उ चाँडो िहरततरै सरौ ँ जातगर नखोजी डेरा सररँ दनै तप्रये। ततमीलाई हतार तसउँदो रंगाउँने धरमा नसोधी तबहे गररँ दनै तप्रये। अगं रु का झप्ु पा ती लहरै छन् बाँकी स्याउ नबेची मधेि झररँ दनै तप्रये। तनम्तो बाँड्न सपु ारी तकनेर खचव नगर पात्रो नहेराई खोल्सी तररँ दनै तप्रये।
गजल बेहुली बनेर गयौ,अकै को नाता जोडेर सारा दोर्हरू मलाई सम्ु पी बाटै मोडेर। म पतन त हाँस्दै अतन्मँदै तिएँ मलामी बीच ओफ! हताररँ दै गयौ बेगझै ँ सािै छोडेर। कस्तो रमाइलो लगन ततमी अतग म पतछ मैले कफन ततमी गयौ मखमल ओढेर। ततमी नाँच्दै तियौ नौमती बाजामा अगाडी म सख ं को तालमा रम्दै तिएँ भाघय तोडेर। दधू दहीले पतछव ए ततमीलाई मलाई माटोले वा! बहु ारी बनेउ कसैको मेरो ज्यानै गोडेर।
गजल याद गर उसको चम्ु बन ततम्रै प्रेमको भार होला बन्धन तभत्र कतत सक्छौ ततम्रै अतन्तम हार होला। उदास हदुँ ा रुने आँखा खसु ी भेट्दा बन्द हन्ु छन् बगलीमा छुरा फाल ततम्रै आतखर मार होला। आफ्नै जीवन बाजी राखी के वल उस्कै पतछ लाघछौ कतत धाउँछौ पतघलएर ततम्रै ज्यान तस'कार होला। ततमी बाँच्ने आधार के हो आँफै ततम्लाई िाहा छै न मटु ु बीच राख्दा उसलाई ततम्रै कतै तचर'फार होला। ततमी बाँच्छौ आफ्नो लागी बाँचक े ो हैनौ अरूको लागी साि खोज्दा खोज्दै उसैको ततम्रै आतखर क'रार होला।
गजल छुवाछूतको पखावलसँगै मतन्दर अलग बनायौ तर राम,बद्ध ु जे भएनी पत्िर त एउटै सजायौ। यद्ध ु का नारा अलग,मैदानका तसपाही अलग तर तहन्दू मतु स्लम जे भएनी खनु त एउटै बगायौ। पानीका धारा तभन्न गाग्री अलग छन् यहाँ तर तपत्तल ताँमा जे भएनी,पानी त एउटै भरायौ। भात पाक्ने भाँडा अलग महल अतन झपु डीका तर सन्ु दर धतीमा फलेको चामल त एउटै पकायौ। कोही सनु को आसनमा सत्ु छन् त कोही बगरमा तर पलपल बाँच्नका लागी सास त एउटै धड्कायौ।
गजल लाली ओठमा सहु ाकै छ तर कान खाली देखे ँ तसरमा उस्तै तसफवु ल राम्रो तर िोरै काली देखे ँ। नाकको मन्ु री उस्तै राम्रो सहु ाएको साडीसँग रातो चोली हातका चरु ा फुलेको झै ँ डाली देखे ँ। हेराई उस्तै लजालु त्यो कके आँखा एकोहोरो ईसारा पो गरौ ँ भन्दा तभत्री मन पो जाली देखे ँ। के स उस्तै सलबलाउँदो मयरू को कल्की सरी तसँगार पेटार खबु ै राम्रो पाके को झै ँ बाली देखे ँ। तसर देखी पाउ सम्म हरे क अगं बान्की पयाव तर छे उमै गई हेदाव ठ्याक्कै आँफनै साली देखे ँ। तसन्दरू पोते लाको भए सप्तरंगी ढाल हुन्थ्यो स्वयम्बरको लागी यहाँ ल्याउनपु ने िाली देखे ँ।
गजल प्रेम के हो प्रेम यद्दु गनेलाई पो सोध्नपु छव हार तजतको मैदानमा मनेलाई पो सोध्नपु छव । कसलाई िाहा छ र यहाँ,बल या बतु द्ध ठूलो घमन्डले इनारतभत्र झनेलाई पो सोध्नपु छव । प्यास के हो तचसो पानी तपएर नै मात्र हुन्न यौवनको बजारमा चनेलाई पो सोध्नपु छव । माया मोह संबन्धको फरक के छ जान्ने भए मतृ िरीर माति सतबीउ छनेलाई पो सोध्नपु छव । धमव कमव पाप पण्ु य खोज्दा यहाँ पाइन्छ र? पापै पापको बैतणी तनेलाई पो सोध्नपु छव । continue...
पिात्को अिव यहाँ तबद्वानलाई नै िाहा हुन्न घोतप्टएर पाउमा सरण पनेलाई पो सोध्नपु छव । भोक तनंरा कष्टहरू कतत हुन्छन् गररबीमा भेट्टाएको रोटीले पेट भनेलाई पो सोध्नपु छव । सक्दैनौ भो जान्न के ही धड्कनको अिव पतन आयव घाटमा हाँस्दै बसाई,सनेलाई पो सोध्नपु छव । को सक्छ भन्न यहाँ जननी र आमा को हुन नारीत्वको मीठो इज्जत गनेलाई पो सोध्नपु छव ।
गजल सतदयौ ँ बगेको नदी सक्ु यो भन्दा फरक नपलाव आयव घाटको मदु ाव उठ्यो भन्दा फरक नपलाव। (Tek Bhandari) हर पल देिको यादले सताउँने यो ज्यानलाई नयन उघादाव छाती दख्ु यो भन्दा फरक नपलाव। (Durga Rimal) ततम्रै अवयवमा हराउँने यो तनमोही मन मेरो नयन उघादाव छाती दख्ु यो भन्दा फरक नपलाव। Partiman Siwa यो तसन्दरू पैरी तदनेले नै खि ु ी लतु ट तदएपतछ बँचेको मीठो बन्धन गम्ु यो भन्दा फरक नपलाव। (Durga Rimal) कोमल हृदयका बैजनी वस्त्र लाएर पर गामी हदुँ ा बँचेको मीठो बन्धन गम्ु यो भन्दा फरक नपलाव। (KD Bhandari Kailo) ततम्रो साि टुटे सँगै यो कृष्ण कुसमु सँग भएको बँचेको तमठो बन्धन गम्ु यो भन्दा फरक नपलाव। (Krishna "Kusum") continue...
सधै ँ खि ु ामत हुन्छ भतन साटेको हृदयमा मन्िन गरे को अमतृ लटु्यो भन्दा फरक नपलाव (Santi Ram Dhakal) तमत्रतामा घात-प्रततघात जन्मेपतछ मौका पारे र मन्िन गरे को अमतृ लटु्यो भन्दा फरक नपलाव। (KD Bhandari Kailo) सन्ु दर, िान्त, रमणीय मेरो देिको पतहचान नेता दलाल बनी घात गयो भन्दा फरक नपलाव। (Sandip Chamling Rai)
गजल बालवु ाको क्यानभासतभत्र ततम्रै याद छदै गएँ छदै जाँदा मनका जलन बतल्झएर मदै गएँ। बालवु ाकै सहारामा बेहोसीमै औँला चाल्दै ततम्रै ततस्वर'हरु संगै झनाव सरी झदै गएँ । हावाको त्यो झोँकका आई उडाउँला की भन्दै डरले हत्के लाले छे क्दै ततम्रो अगं नतजक सदै गएँ। लामो लामो के स ततम्रो झनाव झर झर झरे सरी बालवु ाकै घम्ु टोतभत्र ततमीसँगै चदै गएँ पल पल ततम्रो सम्झनालाई भल्ु न नसक्दामा आज यही क्यानभासतभत्र ततम्लाई पलपल कै द गदै गएँ। continue....
कै ले मेट्दै कै ले कोदै ईन्रेणीझै ँ रंग छदै लजालु ती नयन माँझ लाजको लाली भदै गएँ । (कोमल)२ हत्के लाले ततम्लाई अँगालोमा बाँधी हाम्रो प्रेमील जोडीलाई बन्धनतभत्र हदै गएँ ।
गजल उज्यालो नहदुँ ै आँखा तमच्दै जरुु क्क उठ्ने तठटो साइतकल पछाडी बटुको चेपेर दमक पघु ने तठटो। आज उ यसरी बदत् लयोकी कोट पेन्टमा टाई तभछव बच्ु चे सरुु वालको इँजार हातले कस्दै कुद्ने तठटो। आजकल उ भन्दै तहँड्छ म भटू ानी हैन तसफव नेपाली हुँ वा ! बीसौं वर्व बगडाको डकारमा औँला सँ्ु ने तठटो। मल ु ायम सोफामा बसेर आज उ नीचता झल्काउँदछै रातभर ताराहरू गन्दै तचमको खाटमा सत्ु ने तठटो। आतखर उ नेपाली भार्ी भटू ानी पो हुनपु ने हैन र ? कुनै तदन स्वदेि तफतीको नारासँगै जध्ु ने तठटो। continue.....
सायद यो सफ्ट तटसजु को जमानाले मातत्तएछ क्यार झाडीतभत्र लक्ु दै झार पातले तदिा पछ् ु ने तठटो। तमस्टर ज्याक भाछ आजकल आफ्नै रीत तोडेर तहजो ए जगं े भनी बोलाउँदा खसु ीले चम्ु ने तठटो। ड्याड र ममको कोतचगं तदन्छ आफन्तहरूलाई त्यो बेला पाउ छुँदै आमा बा'लाई पज्ु ने तठटो। नमस्कार भन्दा यू ब्लडी फूल भन्दै ररस पो पोख्छ खल्ु ला चउरमा नमस्ते गरुु बा भन्दै झक्ु ने तठटो। ओफ! आफ्नै पतहचान बेचरे तहँड्दछै रोक्नु कसोरी तहजो 'सस्ं कृतत बचाउँ' को अतभयानमा जटु्ने तठटो।
गजल नेत्र हीन यो सरकार अहँ! देख्दैन सडकको किा कतहलै रोक्न सक्दैन चक्काजाम टायरको प्रिा। टल्कने जत्तु ा देखाउँदै रातो कापेटमा सतजन्छन् तर बझ्ु दैनन् डोको बोक्ने डोल्पा बासीको व्यिा। बढु ेसकालमा मजु ा परे का ती अनहु ारले भतन रहन्छ भो अब नसोध सपनामा आएर कस्तो छ अवस्िा। क ख तसक्ने समयमा तहँड्न तसकायौ जगं लततर अतघपतछ लगाएर राइफल तभनेहरुको जत्िा।
Thanks all for going through my Gajals (गजल). Please leave any feedbacks. TEK BHANDARI tnbhandari62@gmail.com Copyright is strictly prohibited.
Nepali Gajal collections written by Tek Bhandari.